Archdiocese of Mandalay blog: 2013
ငွေသည် ချမ်းသာခြင်း၊ ငွေသည်ဆင်းရဲခြင်း
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ဘ၀မှာတွေ့ ကြုံရတဲ့ စားဝတ်နေရေး ကိစ္စတွေအတွက် နေ့စဉ် လှုပ်ရှား သွားလာနေကြပါသည်။ အဲ့လို လှုပ်ရှားသွားလာရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကတော့ ငွေရရှိဖို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသာလျှင် လူသားတွေ အတွက် အခြေခံအားဖြင့် စားဝတ်နေရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ငွေကို လိုတာထက် ပိုပြီး မက်မော တွယ်တာရင်တော့ဖြင့် အဲဒီသူအတွက် ငွေက သူ့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တော့မှာ မဟုတ် သူ့အတွက် အန္တရာယ်ပင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ပိုက်ဆံမရှိရင်လည်း လူလောကမှာ မျက်နှာငယ်ရတာ ကတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့် ချမ်းသာမှ လူရာဝင်၊ လူရာ သွင်းချင်ကြပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရပ် တွေ့ကြုံရဖန် များလာတဲ့အခါ (ဒါမှ မဟုတ်) လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုလည်း ဇောက်ချလုပ်လိုတဲ့ စိတ်မရှိတဲ့ အခါမှာ ငွေရဖို့အတွက် အလွယ်လမ်းကို လိုက်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် သူများရဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းကို မတရား လုယူတာတို့ ၊ခိုးယူတာတို့နဲ့ အခြား ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ရရ ငွေရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး စိတ်ရိုင်း တွေဝင်လာပြီး လမ်းမှားကို ရောက်ရှိသွားပြီး ပျက်စီး ကုန်ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ နည်းလမ်းမကျပါပဲ “အနာသိမှ ဆေးရှိ" ဆိုသလို အခက်အခဲရှိရင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ မိမိ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲရသလဲ၊ အလုပ်အကိုင် မကြိုးစားလို့လား ၊
အချိန်ကို အကျိုးမဲ့ ဖြုန်းတီးနေလို့လား ၊ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားအတုပဲ ငွေ အလွယ် လိုချင်နေလို့လား ဆိုတာကို မိမိကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ရင် အဖြေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေကိုပဲ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း အခက်အခဲတွေ အားလုံးကို သေသေချာချာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၊ မိမိ တွေ့ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲကို နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ ဖြေရှင်း ပေးရပါလိမ့်မည်။
လောကမှာ လူအချို့ဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရရင် စိတ်ချမ်းသာကြတယ်။ ကိုယ်သွား ချင်တဲ့နေရာ သွားရရင် (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်ဝတ်ချင် တာဝတ်ရရင် (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေ စားရရင် စိတ်ချမ်းသာကြတာကတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်ဖြင့် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းလည်း မသွားရ၊ ကိုယ်စားချင်တာလည်း မစားရ ဆိုရင်ဖြင့်တော့ စိတ်ဆင်းရဲတော့ တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ငွေရှိရင်ပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်ပြီလို့ ယူဆတာဟာလည်း ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
လူသားတွေဟာ လောဘရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် များသောအားဖြင့် ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ ပိုပြီး ချမ်းသာချင်ကြတယ်။ တစ်သိန်းရှိရင် နှစ်သိန်းလိုချင်၊ နှစ်သိန်းရှိရင် ဆယ်သိန်းလိုချင်၊ ကား တစ်စီးရှိရင် နှစ်စီးလိုချင်ပြန်ရော။ အဲဒီတော့ သူတို့တွေဟာ ငွေအတွက်ပဲ လုံးပန်းနေရတော့ ငွေရှိပေမယ့် သွားချင်တဲ့နေရာ မသွားရ၊ လွပ်လွပ်လပ်လပ် မနေရတော့ဘူး။ ငွေဟာ သူတို့ရဲ့ အပြင် လောကမှာ ချမ်းသာခြင်းကို ပေးနေပေမယ့် ငွေအတွက် သူတို့ရဲ့ စိတ်ဟာ အရမ်းကို ဆင်းရဲ နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေဟာ လူတွေအတွက် ချမ်းသာခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သလို ဆင်းရဲခြင်း အကြောင်းလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အမှန်မှာ ငွေကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အပျက်အစီးမခံပဲ သတိ တရားနဲ့ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။
ငွေကို ချွေတာရမယ်။ စုဆောင်းရမယ်။ ငွေကို ရှာရင်လည်း သမ္မာအာဇီဝနည်းနဲ့ပဲ ရှာဖွေရပါမယ်။ ငွေကြေးကို ရှာဖွေရာမှာ ၀ီရိယ လိုအပ်ပေမဲ့လည်း ၀ီရိယတစ်ခုတည်းကို အားကိုးပြီးလည်း မရပါ။ ဉာဏ်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ငွေအပေါ်လည်း စိတ်ထားတတ်ရပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ ငွေကိုရှာတယ် ပြီးရင် အဲ့ဒီငွေဟာ သုံးမခံဘူးလို့ များသောအားဖြင့် သိရှိ လက်ခံပြီး လိုက်နာ ကျင့်သုံးကြပါတယ်။ အမှန်မှာ ငွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာရမယ်။ ရှာလို့ရတဲ့ ငွေအချို့ကို အသုံးပြုပြီး အချို့ကို ထိထိရောက်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ ထိထိရောက်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရေး အပိုင်းမှာ အရမ်းကို အားနည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငွေကို သုံးခုခွဲပြီး သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ နံပါတ် တစ်အချက်ကတော့ အရင်းကို ထပ်ဖြည့်ပြီး လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့၊ ဒုတိယအချက်ကတော့ စားဖို့နဲ့ လှူဒါန်းဖို့ ၊ တတိယအချက်ကတော့ သေရေးရှင်ရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေက ချည်းမပေးနိုင်တဲ့အရာ ငွေနဲ့ ချည်းဖြေ ရှင်းလို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိတာကိုလည်း သတိရသင့်ပါတယ်။ ငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မာကု (ဒဿန) ရေး သားထားတဲ့ ရှင်သန်ထိုက်သည့် လူ့ဘ၀စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးအချို့ကို လူငယ်တွေကို ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ နူးညံ့တဲ့ အိပ်ရာ ၀ယ်နိုင်ပေမယ့်၊ အိပ်မက်ကောင်းကောင်းကိုတော့ မ၀ယ်ယူနိုင်ပါဘူး၊ ပိုက်ဆံနဲ့ ဇိမ်ကျကျနေနိုင်တဲ့ အိမ်ကို ၀ယ်နိုင်ပေမယ့်၊ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုကိုတော့ ၀ယ်မယူနိုင်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ နတ်သုဒ္ဒါမျှ ကောင်းတဲ့ ထမင်းပုံကို ၀ယ်နိုင်ပေမယ့် ကောင်းတဲ့ အရသာကိုတော့ ၀ယ်မယူနိုင်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်တစ် စောင်ဝယ်နိုင်ပေမယ့်၊ ကောင်းကင်ဘုံ (ချမ်းသာစစ် သုခမှန်) လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုတော့ မ၀ယ်နိုင်ပေဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါ၊ မျက်နှာလိမ်း မိတ်ကပ် ရောင်စုံဝယ်နိုင်ပေမဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုကိုတော့ ၀ယ်မယူနိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ သိန်းသန်းချီတဲ့ စာအုပ်တွေ ၀ယ်နိုင်ပေမယ့်၊ ဉာဏ်ပညာကိုတော့ ၀ယ်မယူနိုင်ပေဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ အချိုဆုံး သကြားလုံးကို ၀ယ်နိုင်ပေမယ့်၊ အချိုသာဆုံး နှလုံးသားကို ၀ယ်မယူနိုင်ဘူးလို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူငယ်များလည်း ငွေသည် ချမ်းသာခြင်းပေးသလို၊ ဆင်းရဲ ပင်ပန်းခြင်းကိုလည်း ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတိတစ်ခုထားရှိပြီး လိမ္မာ ပါးနပ်စွာနဲ့ ငွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချပြီး လောက လူ့ဘ၀ကို ဆက်လက် ရုန်းကန်သွားနိုင်တဲ့ လူငယ်မောင်မယ်လေးများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ၊
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:14 PM
ဘာကြောင့် မေလကို စိတ်ပုတီးလလို့ သာသနာတော်က သတ်မှတ်ပေးထားတာလဲ။
ဒီတစ်ပတ်မှာဖြေကြားပေးရမယ့် မေးခွန်းလေးကတော့ “ဘာကြောင့် မေလကို စိတ်ပုတီးလလို့ သာသနာတော်က သတ်မှတ်ပေးထားတာလဲ။
မေလကို စိတ်ပုတီးလလို့ အမိကက်သလစ် သာသနာတော်ကြီးက သတ်မှတ်ပေးမထားပါဘူး။ သို့ သော် သာသနာတော်အတွင်းမှာတော့ May is the month of Mary မေလကို မာရီးယားသခင်မရဲ့ လဆိုပြီး မယ်တော်ရှင်ကို သဒ္ဓါ ကြည်ညိုထားတာပါ။ စိတ်ပုတီးကို Mini-bible (သမ္မာကျမ်းစာငယ်)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ပုတီးစိပ်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် ပြုတော်မူခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ခြင်း သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်ထောက်ရှု ဆင်ခြင်တဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ပုတီးဟာ မယ်တော်သခင်မရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး ဆုတောင်း မေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက် မယ်တော်နဲ့ စိတ်ပုတီး ခွဲမရသလို မယ်တော်ရှင်ရဲ့ မေလမှာလည်း စိတ်ပုတီးစိပ်ခြင်းနဲ့ မယ်တော်ရှင်ကို သဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်း အမှုဟာ ခွဲခြားပစ်လို့မရတဲ့ အတွက် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ မနောထဲ၊ သဘောထဲမှာ စိတ်ပုတီးလလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် အမိ ကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးက စိတ်ပုတီးလ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လ ကတော့ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်ပါတယ်။ October is the month of the Holy Rosary အောက်တိုဘာလဟာ သန့်ရှင်းသော စိတ်ပုတီးလ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၇၈ ၁၉၀၃ ခုနှစ်များအကြားတွင် သာသနာတော်ကို အုပ်ချုပ်တော်မူခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင်ချုပ် (၁၃)ဆက်မြောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လေအိုအရှင်သူမြတ်က “စိတ်ပုတီးနဲ့ ကက်သလစ်မိသားစုများရဲ့ အိမ်ထောင်စု စိတ်ပုတီး စိပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့” (၁၃)ခုမြောက် စာချွန်တော်ကို ရေးသား ထုတ်ပြန်တော်မူခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ စာချွန်တော်ထဲမှာ -The month of October has been speci- ally selected as the ''Month of the Rosary'' and the feast of the Holy Rosary is now celebrate on the 7th of this month အောက်တိုဘာလကို စိတ်ပုတီးလအဖြစ် အထူး ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ဤ စိတ်ပုတီးပွဲတော်ကိုလည်း ဤလရဲ့(၇) ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ကျင်းပလျက်ရှိနေသည်” တဲ့။ နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ့ကို စိတ်ပုတီးပွဲတော်နေ့ အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာရပုံမှာ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၅၇၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ့တွင် ခရစ်ယာန်များနှင့် တူရကီလူမျိုးများ လေပန်းတို ရေကြာင်းတိုက်ပွဲမှာ ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ နှိုးဆော်ချက်အတိုင်း ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ ရှိနေတဲ့ ခရစ်ယာန်များရဲ့ စိတ်ပုတီးစိပ် ဆုတောင်းခြင်း၊ ခရစ်ယာန် စစ်သားများကလည်း တစ်ညလုံး စိတ်ပုတီးစိပ်ကာ ဆုတောင်းမေတ္တာဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြလျက် သုံးချိုး တစ်ချိုး စစ်အင်အားသာ ကျန်တော့တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘက်မှ စစ်သားများဟာ ခံစစ်အဖြစ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အင်အားနှစ်ဆမျှ ပို၍ ကြီးမားတဲ့ တူရကီတပ်များ အရေးနိမ့်ကာ စိတ်ပုတီးတန်ခိုးဖြင့် ခရစ်ယာန်များတိုက်ပွဲ အောင်လံ လွှင့်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိပ်ပုတီး တန်ခိုးတော်နဲ့ ခရူးဆိတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးကို အောင်လံ လွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ့ကို ထိုစဉ်အခါ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၅၆၆) ခုနှစ်မှ (၁၅၇၂) ခုနှစ်အတွင်း သာသနာတော်ကို အုပ်ချုပ်တော်မူခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင်ချုပ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပဉ္စမမြောက် ပီဦး အရှင်သူမြတ်မှ အလွန်သန့်ရှင်းသော စိပ်ပုတီးပွဲတော်နေ့ အဖြစ် နှစ်စဉ် ကျင်းပသွားကြရန် သတ်မှတ် ပေးတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေလဟာ ဘယ်လိုလုပ် မာရီယားသခင်မရဲ့ လဆိုပြီး သဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်း ဖြစ်လာခဲ့ရတာလဲ။ အခြေခံအားဖြင့် အချက် (၃)ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက် အနေနဲ့ May is the month of blossoms, flowers and new life မေလသည် သစ်ပင်ပန်း မာလာများ ပွင့်ဖူးသောလ၊ ရွက်သစ်ခက်သစ်များ ထွက်သော လ၊ ဘ၀သစ်ဖြင့် ရှင်သန်လာသောလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပတိုက်မှာ ဆောင်းတွင်း
တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဆီးနှင်းများ ထူထပ်စွာ ဖုံးလွှမ်းပြီး အအေးဒဏ် ပြင်းထန်လွန်းလို့ သဘာဝတစ်ခုလုံး အသက်မဲ့တဲ့ ဘ၀ရောက် သွားသည့်အလား ဖြစ်ရှိနေသောကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်ပန်းမာလာများဟာ အရွက် မရှိ၊ ပန်း မရှိ အရိုး ပြိုင်းပြိုင်း ခါး ကိုင်းကိုင်း သဏ္ဍာန်သို့ ရောက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းအကုန် နွေအကူး၊ မအေးလွန်း မပူလွန်းတဲ့ မေလမှာ သစ်ပင်ပန်းမာလာများဟာ ရွက်နုတွေဝေ၊ ပန်းတွေဝေနဲ့ အရည်ရွှမ်း နုထွား မြိန်ယှက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ သီးနှံများ သီးလာချိန် သတ္တ၀ါအများ ပျော်မြူးပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး အသက်ပြန် ၀င်လာချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နှစ်လိုအားရဖွယ် အရမ်းကောင်းတဲ့ မေလဟာ မယ်တော်ရဲ့ အသက်တာနဲ့ ဆက်စပ်လာပါတော့တယ်။ မယ်တော်ဟာ ဘုရားဖန်ဆင်းခံ သတ္တ၀ါထဲမှာ အလှဆုံး လက်ရာ၊ အပြောင်အမြောက်ဆုံး ပန်းတစ်ပွင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်တော်အားဖြင့် ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်ဟာ ဒီလောကကြီးထဲသို့ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ အသက်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မယ်တော်အားဖြင့် သီးပွင့်လာတဲ့ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်သခင်ကို လူသားတွေ ရရှိခြင်းအားဖြင့် ဘ၀အသစ် အသက်တာသစ်နဲ့ ရှင်သန်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေနေတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး မယ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်၌ ရှင်သန် နုပျိုအသက်ဝင်လာရပြန်လို့ မေလကို မယ်တော်မာရီးယားရဲ့ လအဖြစ် လူတွေရဲ့ ဘ၀ထဲမှာ သတ်မှတ်လျက် သဒ္ဓါကြည်ညိုလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ May is the month of the Easter season မေလဟာ အီစတာ အခါတော်သမယရဲ့လ ဖြစ်တယ်။ အမိ သာသနာတော်ကြီးက ပါစကားနက်နဲရာ အကျိုးဆက်များကို ထောက်ရှု စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက် ဘာသာဝင် သားသမီးများကို ရက် (၅၀)တိတိ ပေးထားပါတယ်။ လူသားအားလုံးရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်၌ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အီစတာ၊ ပါစကား အခါသမယမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ အသစ် ပြုပြင်ခြင်းခံရသော သားသမီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတော်မူတဲ့ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော သခင်ရဲ့
တန်ခိုးတော်ကို ကမ္မဌာန်း ရှုကြရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်ဝ စုံလင်စွာ အခံရဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မယ်တော်မာရီယားဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်တော်နဲ့ မေလရဲ့ ဆက်နွယ်မှုက မယ်တော်နဲ့ အီစတာ၊ မယ်တော်နဲ့ သားတော်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းအမှု စတဲ့ ဆက်နွယ်မှုများကို မာရီယားသခင်မရဲ့ မေလက မီးမောင်း ထိုးပြနေပါတယ်။ မယ်တော်ရဲ့ နှစ်လို အားရဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ဟာ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်း အမှုတော်မှ သီးပွင့်လာကြောင်း ဖော်ပြလိုတဲ့ အတွက် ပါစကားပွဲတော် အကြို သုံးရက်ကို ခမ်းနားစွာ အမိအသင်းတော်ကြီးက ကျင်းပစေခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေလကို မာရီယား သခင်မရဲ့လအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ အချက်အနေနဲ့ Comparison between Maia and Maria မာအီးယဆိုတဲ့ နတ်ဘုရားမနဲ့ မာရီယားသခင်မတို့ နှိုင်းယှဉ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “မေ”လို့ခေါ်တဲ့ မေလဟာ မာအီးယားလို့ခေါ်တဲ့ နွေဦး ဘုရားမရဲ့ နာမည်ကနေ ဆင်းသက်လာပါတယ်။ ဂရိ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်အရ မာအီးယားဟာ ဟားမက်စ်လို့ ခေါ်တဲ့ စေတမန် နတ်ဘုရားရဲ့မယ်တော် ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရာ နွေဦးကာလမှာ အသီးအနှံတွေ အောင်မြင်ဖို့ အဲ့ဒီ မာအီးယားကို ပူဇော် ပသကြရပါတယ်။ မာအီးယားကို ယုံကြည်သူတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ယုံကြည်ခြင်း ဆုကျေးဇူးရရှိလာပြီး ခရစ်ယာန်တွေဖြစ် လာကြတော့ နတ်ဘုရားမ မာအီးယားနေရာမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ မယ်တော် မာရီယားကို အစားထိုး လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ မာအီးယားဟာ ဟားမက်စ်လို့ ခေါ်တဲ့ စေတမန် နတ်ဘုရားရဲ့ မယ်တော်ဖြစ်သလို မာရီယားသခင်မ ဟာ ကောင်းကင်မှ ခမည်းတော် ဘုရားရှင်ရဲ့ လောကသို့ စေလွှတ်ခြင်း ခံရတဲ့ စေတမန် ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ ယေဇူး ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ မယ်တော် ဖြစ်တော်မူပါတယ်။ မေလကို ရှေးခေတ် နတ်စားတွေက မာအီးယားကို အပ်နှံခဲ့သလို ခရစ်ယာန်တွေက မေလကို မာရီယားသခင်မ လက်တော်ထဲ အပ်နှံလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေ မာအီးယား နတ်ဘုရားမကို ပူဇော် ပသခြင်း ပြုလာခဲ့ကြသလို သူတို့အားလုံး ခရစ်ယာန်တွေလည်း ဖြစ်လာကြတော့ မာအီးယား အစား မယ်တော် မာရီယားကို မွေးကြိုင်သော ပန်းများဖြင့် မေလ၌ ပန်းကပ်လှူကြခြင်း အားဖြင့် မယ်တော်မာရီယားကို ဂုဏ်ပြုလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေလဟာ မာရီယားသခင်မရဲ့ လဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသလို အောက်တိုဘာလဟာ စိတ်ပုတီးလ အဖြစ် အမိ ကက်သလစ် သာသနာတော်ကြီးက သတ်မှတ် ပေးထားပါကြောင်း ဖြေကြား လိုက်ရပါတယ်။ ဘုရားရှင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။
ဘုန်းဘုန်း ဒိုးမနစ် ဦးဂြိုဟ်တု
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:36 PM
နင်စိတ်ပြောင်းပြီး ထွက်ခွါသွားခဲ့တယ်နော်။ ။
နင်လေဝေးရာထားခဲ့ ရှာတယ်နော်။ ။
ငါ့ဘ၀အား နင်ဖျက်ဆီးသွားရက်တယ်နော်။ ။
နင် ငါ့အဝေးထွက်လို့ ပြေးတယ်နော်။ ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:42 PM
သင်ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သင့် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဘာအကြံအစည်တွေ ရှိနေသလဲဆိုတာကို သင့်ရဲ့ နဘေးမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ရပ်ပြီး ကြည့်နေမှာပါ။ သူ့မှာ သင့်လိုပဲ လက်တွေ ခြေတွေရှိတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့ကို သင်ထိတွေ့လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ချောမောလှပနေရင်လည်း သင် သူ့ကို မြင်တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးစီရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စောင့် သိကြားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရတယ်ဆိုတာ ဘုရားသခင်က ပေးအပ်လိုက်တဲ့ အလွန် ထူးခြားတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ သင်မှန်းဆ ကြည့်လိုက်ပါ။ လောကကြီးမှာ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး၊ သင့်မှာ ကြင်နာ ပေးမယ့်သူ၊ စကားပြောမယ့် သူ၊ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် မရှိခဲ့ရင် သင် ဘယ်လိုနေမလဲ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တစ်ဦးတယောက်မျှ မရှိတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ များသောအားဖြင့် အိမ်မှာ၊ ကျောင်းမှာ၊ အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတော့ ရှိကြတာချည်းပါပဲ။ ဆိုပါစို့၊ သင်က သဲကန္တာရကြီးထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲဆိုရင်တောင်၊ သင့်မှာ အင်မတန် နီးကပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ ရှိပါသေးတယ်။
သင်ကတော့ ပြောပါလိမ့်မည်။ “ဘုရားက ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ နောက်ပြီး ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ စွန့်ခွာမှာ မဟုတ်ဖူး။ မယ်တော်သခင်မလည်း ရှိသေးတယ်။ အမြဲတမ်း ဘုရားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားမှာ ကြားဝင် စေ့စပ်ပေးမယ့် သူရှိနေတာပဲ သူတို့တတွေဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ”လို့ ဒါဟာလည်း မှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စောင့်သိကြားကတော့ သင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးပါ။ သင့်ဘေးနားက ဘယ်တော့မှ ထွက်ခွါသွားမယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်သိဖို့ ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သင့်အဖေထက် ပိုပြီး သင့်အတွက် အလုပ်ကို ပိုလုပ်ပေးမယ်။ သင့်အမေထက် ပိုပြီး ပူပင် သောကရှိတတ်တယ်။ ပြီးတော့ သင့်နားမှာ သင့်သူငယ်ချင်း၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အဖေါ်တွေထက် ပိုပြီး နီးကပ်စွာ နေပေး နေတဲ့သူပါ။ သူက ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ တခြားဘာအလုပ်မှ မလုပ်ရပဲ သင့်အနားမှာ သင့် သူငယ်ချင်းအဖြစ်၊ သင့် တစ်ဦးတည်းအတွက် နေပေးဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ စေလွှတ်ခြင်း ခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း သင့်နားကနေ မခွာတဲ့သူပါ။
သင့်ကိုယ်သင် သိတာထက်၊ သူက ပိုပြီး သင့်ကို နားလည်ပြီး သိနေတယ်။ သင် သူ့နားကနေ ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားလို့ မရသလို၊ သင်ကလည်း သူနဲ့ ခွဲထွက်ဖို့ ဆန္ဒ မရှိသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ သင့်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့သူ၊ အကြံပေးတဲ့သူ၊ နှစ်သိမ့် အားပေးတဲ့သူ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ သင့်ကြားမှာ သံတမန် ဖြစ်တယ်။ သူဟာ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ သင့်ရဲ့ ကိုယ်စောင့်သိကြား ဖြစ်တယ်။ သင့်အနားမှာ သူရှိနေတယ် ဆိုတာ သင်ခံစားမိရဲ့လား။ ဒီ ခဏလေးအတွင်းမှာ သင်စဉ်းစားနေတာကို သူ သိနေပါတယ်။ သူ့အတွက်ကတော့ သင့် အတွေးတွေ၊ အမူအရာတွေ၊ စကားလုံးတွေဟာ သူ့အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးနေပါတယ်။
သူဟာ သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကို မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ ဘေးမှ ကင်းလွတ်အောင် စောင့်ကြပ်ပေးဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ညွှန်ကြားခြင်းကို ခံရသူဖြစ်တယ်။ သင့်ကို သူစကားပြော သလား၊ ဟုတ်ပါတယ်။ သူ ပြောပါလိမ့်မယ်။ သင့် ၀ိညာဉ်နဲ့၊ သင့်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှား၊ အမှန် ခွဲခြားသိတဲ့အသိကို သူ ပြောနေပါလိမ့်မယ်။ သင့် စိတ်ကနေ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ ဘုရားရှိခိုးဖို့ ကိုယ်တော်မြတ် ပင့်ယူဖို့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေတာတွေက ကိုယ်စောင့်သိကြားက သင့်အပေါ် နှိုးဆော်ပေးနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး သင်က ဆိုးနေမယ်ဆိုရင် သူက သင့်ရဲ့ ၀ိညာဉ်ကို ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိဖို့၊ သတ္တိရှိဖို့ လှုံဆော် နေလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကို သင်က အမြဲသတိတရ ရှိနေရမယ်။ သူဟာ အစွမ်းအစနဲ့ အမျှော်အမြင် အတွေးအခေါ်တွေ ရှိပေမယ့် သင့်ကို ဘာမှ တွန်းအားပေးလို့ မရပါဘူး။ သင့်ရဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွပ်လပ်မှုကို သူက ၀င်စွက်ဖက် ဖိအားပေးလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်စောင့်သိကြားဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို လှုံဆော်ပေးပြီး ယုံကြည် လက်ခံစေအောင် လုပ်ပေးပေမယ့် ဘယ်တော့မှ အမိန့် မပေးဘူး။ သင်သူ့ကို စကားပြောနိုင်ပြီလား လူကောင်းတွေက ကိုယ်စောင့်သိကြားနဲ့ အမြဲတမ်း စကားပြောတယ်။ သင့် ကိုယ်စောင့်သိကြားကလည်း သင်သူ့ကို စကားပြောဖို့ အမြဲ မျှော်လင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ကို စဉ်းစား လိုက်တာနဲ့ သူက သင့်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့သူအဖြစ် ကူညီပေးလိမ့်မယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ နေ့စဉ် မှတ်တမ်းကို ဒိုင်ယာရီထဲ ရေးလေ့ရှိကြတယ်။ ကိုယ်စောင့်သိကြား ကတော့ သင့်ကို မှတ်ဖို့ ဒိုင်ယာရီလည်း မလိုဘူး။ သင် ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာ အားလုံး မှတ်မိနေတယ်။ သိလည်း သိနေတယ်။ တနေ့မှာ သူဟာ သင် စဉ်းစားတဲ့အရာတွေ၊ စကားလုံးတွေ၊ အမူအရာတွေ၊ အပြုအမူတွေ အားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ တင်ပြရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် ကိုယ်စောင့်သိကြားကို သတိရပါ။ မကြာခဏ သူ့ကို ဆုတောင်းပါ။ သူ့ကို အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ အမြဲ အမှတ်ရနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါ။
ဒါနဲ့ သင်ဟာ သူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်မှုကို ကျေးဇူးတင်နေမယ်။ တစ်နေ့မှာ သင်သူ့ကို မြင်လိမ့်မယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ သင်ကော သူ့အတွက်ရော အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင် ဒီလောကကို စွန့်ခွာသွားတဲ့နေ့မှာ သူဟာ သင့်ဘေးမှာရှိပြီး အင်အားကြီးစွာ အလင်းတန်းများကို ထုတ်လွှတ်ပြီး နောက်ဆုံး သစ္စာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် နောက်ဆုံး နေပေးလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ သင့်ဘ၀မှာ ကောင်းစွာနေခဲ့ရင် သူက ပြောလိမ့်မယ်။ လာပါ သူငယ်ချင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ အိမ်တော်ဆီသို့ မြန်မြန်သွားကြစို့ ဟူ၍ . . . . . . .။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:12 PM
ရှင်မာတေဦးကျမ်း (၁၂း ၁၃) “အသီးအားဖြင့် အပင်ရဲ့သဘောကို သိနိုင်တယ်” လို့ ဆိုထားတယ်။ ရှင်ယောဟန် ကျမ်း(၁၅)မှာလည်း သခင်ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင် ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ စပျစ်နွယ်ပင် (သခင်ခရစ်တော်) နှင့် အကိုင်းအခက်များ (ခရစ်ယာန်များ)ဟာ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ရမယ့် အကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတယ်။ အသီးမသီးတဲ့ အကိုင်းအခက်ဆို ခုတ်လှဲ ရှင်းပစ်ခြင်းခံရမယ်လို့
မိန့်မှာခဲ့တာကိုလည်း သတိတရားထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခရစ်ယာန် ဘ၀သက်တာကို ရင်ဝယ်ပိုက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေမှာ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းအပေါ် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း သြဇာ ညောင်းလွှမ်းမိုးနိုင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းခြင်း၊ သဘောထားကြီးပြီး နားလည် ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်း၊ မေတ္တာ စေတနာထားတတ်ခြင်း ၊ ရိုင်းပင်း ကူညီပေးတတ်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ လူမှုရေး၊ ကရုဏာရေး နယ်ပယ်တွေမှာ တစ်ဖက်ကမ်းထိ မဟုတ်တိုင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ ရောက်ရှိနိုင်ကြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှလည်း ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရခြင်း ဆိုတဲ့ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အကိုင်းအခက်တွေက အသီးအပွင့်တွေနဲ့ ဝေဆာ ထိန်ညှီးလို့ နေမှာပေါ့။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆင်ခြင် သုံးသပ်စရာ အဖြစ်အပျက်လေးနှစ်ခု ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
စပါးတွေ ၀င်းမှည့်လို့လာတဲ့ ကောက်ရိတ် သိမ်းမယ့်အချိန် မတိုင်ခင်လေးမှာ သားအဖနှစ်ယောက် လယ်ခင်းတောထဲ ဖြတ်လျှောက် သွားကြတယ်။ “အဖေ ... ဘာလို့ စပါးပင် တော်တော်များများက အကိုင်းတွေ ညွှတ်ပြီး နေနေကြတာလဲ၊ တချို့အပင်တွေဆို ထောင်မတ်နေတာပဲ” လို့ သားဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။“သားလေး ... ထောင်မတ်နေတဲ့ စပါးပင်တွေကို အဟုတ် မှတ်မနေနဲ့။ အဲဒီအပင်တွေက အဆံပါတာ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုင်းညွှတ်နေတဲ့ စပါးပင်တွေကသာ အဆံ ပါတာ၊ မှတ်ထားနော် ... သိလား ” လို့ ကောင်ကလေးကို အဖေက ရှင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်။
(ခ) ဘာကြောင့် ထူးကဲပျံနိုင်တာလဲ ...
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်အစားဆိုဒ်စုံ၊ အရောင်စုံ ပူစီဖောင်းတွေကို မိုးပေါ် လွှင့်တင်နေတဲ့ လူကြီးကို ငေးမော ကြည့်နေပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော ပူစီဖောင်းတွေက အခြား ပူစီဖောင်းတွေထက် ခပ်မြင့်မြင့် ပျံနိုင်၊ တက်နိုင်တာကို တွေ့ရတော့ ကလေး က စပ်စပ်စုစု သွားမေးပါတယ်။ “ဦးဦး ... ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီ ပူစီဖောင်းတွေက အခြားဟာတွေထက် ပိုမြင့်ပြီး ပျံ တက်နိုင်တာလဲဟင် ... အရွယ်အစား၊ ဒါမှမဟုတ် အရောင်တွေ မတူကြလို့လား” “မဟုတ်ဘူးကွယ့် ကလေးရဲ့ ... အထဲမှာရှိတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ငွေ့အနည်းအများ မတူ ကြလို့ပါ ” လို့လူကြီးက ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:51 PM
စာဖက်သူများရှင် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဂျူးသူရဲကောင်းမလေး ဂျူးဒစ်ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ပြပေးပါမယ်။
ဂျူးဒစ်ဟာ ဂျူဒေယပြည်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အသက်ရှင်သန်တဲ့ခေတ်အခါက အာဆီးရိယပြည်၊ နီးနေဝေးမြို့တော်ကို “နာဘူခဒေါနမော်” ဆိုတဲ့ မင်းကြီးအုပ်ချုပ် စိုးစံပါတယ်။ ကြီးမားများပြားတဲ့ စစ်တပ်အင်အားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ “နာဘူခဒေါနမော်” မင်းကြီးမှာ အင်မတန်မှ စစ်ရေး ကျွမ်းကျင်ပြီး၊ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်တဲ့ “ဟိုလိုဖန်းနေ”ဆိုတဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးတစ်ဦး ရှိပါတယ်။ မင်းကြီးဟာ သူ အုပ်ချုပ်စိုးစံနေတဲ့ နယ်မြေတွေ၊ တိုင်းနိုင်ငံတွေ၊ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုများလာအောင် ကမ္ဘာလူသားလုံးက သူ့ခြေရင်းမှာ ပျပ်ဝပ်ခယကြစေဖို့ နယ်ချဲ့စစ်တွေ တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေ အများစုဟာ မင်းကြီးနဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးတို့ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မူ အောက်မှာ ကျရှုံး ခဲ့ကြရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ “နာဘူခနော်မော်” မင်းကြီးဟာ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ နယ်မြေတွေကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ဖို့ရန် သူ့ရဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးကို တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီး ဟိုလိုဖန်းနေဟာ ကြီးမားလှတဲ့ စစ်တပ်အင်အားနဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေ အများကြီးကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘုရားတွေ၊ ဘုရားကျောင်းတွေကို လုယူ၊ ဖျက်စီးပစ်တယ်ဆိုတာကို ဂျူးလူမျိုးတွေ ကြားသိထားကြတဲ့အတွက် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေ အလွန် တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးကြပြီး သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားဖြစ်တဲ့ ဂျေရုဇလင် ဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွက်လည်း စိုးရိမ် ပူပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂျူးလူမျိုးတွေ အခြေချနေထိုင်ကြတဲ့ ဆမာရိယကိုနာ၊ ဘက်ဟိုရွန်၊ ဘယ်လ်မိန်၊ ဂျေရီခိုနဲ့
ဧဆိုရာဆိုတဲ့ ဒေသတွေကို သတိပေးပြီး မကြာခင် ကျရောက်လာမယ့် စစ်ဘေးအတွက် ရိက္ခာတွေ စုဆောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ သူတို့ အကြီးအကဲတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ထာဝရဘုရားဆီ ဆုတောင်းပြီး ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုပဲ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါစေ။ တဖက်က ဟိုလိုဖန်းနေရဲ့ စစ်တပ်အင်အားဟာ အဆမတန် တောင့်တင်းနေတာကို သူတို့ ရိပ်စားမိခဲ့ကြတယ်။ ဂျူး လူမျိုးတွေ ဘယ်လိုပဲ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ကြပါစေ။ ဟိုလိုဖန်းနေရဲ့ စစ်တပ်တွေဟာ ဂျူးတို့နဲ့ အသက်ဆက်နိုင်ဖို့ အဓိက အချက်အချာဖြစ်တဲ့ ရေရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတိုင်းကို စစ်တပ်အင်အားနဲ့ ထိမ်းချုပ်ထားလိုက် ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂျူးတွေဟာ ရေရှားပါး၊ ပြတ်လပ်မှုကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ ရေကို လုံလောက်စွာ မသောက်သုံးနိုင်တော့တဲ့အတွက် ခွန်အား နည်းလာကြတဲ့ ဂျူးတွေထဲက တစ်ချို့ဟာ ဟိုလိုဖန်းနေစစ် သေနာပတိချုပ်ကြီးထံကို သွားရောက် အညံ့ခံဖို့ ၊ သူတို့ရဲ့ ဒေသတွေကို သိမ်းယူစေဖို့အတွက် ဆန္ဒ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ဇနီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အစာရေစာငတ်ပြီး သေရမှာထက် တိုင်းတပါးသားတွေရဲ့ ကျွန်ခံရတာ ပိုကောင်းမယ်လို့လဲ ခံယူကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ခံစားနေရတဲ့ ဒဏ်ကို မခံစားနိုင်ကြသလို သေလု မတတ် ဖြစ်နေကြရှာတဲ့ ဇနီးနဲ့ ကလေးတွေကိုလဲ မကြည့် ရက်ကြလို့ပါပဲ။ ဒီလို တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် ဂျူးလူမျိုး အကြီးအကဲတွေဟာ နောက်ထပ် ငါးရက်တိုင်တိုင် ဆု တောင်းပြီး အကူအညီရနိုင်ဖို့ စောင့်ကြပါစို့။ အကယ်၍ ငါးရက်တိုင်အောင် အကူအညီမရခဲ့ရင် သင်တို့ တောင်းဆိုနေကြတဲ့အတိုင်း အညံ့ခံပါမယ်လို့ ကတိ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ရေပြတ်၊ အစာပြတ်မှုကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျ၊ အားငယ်နေကြတဲ့ ဂျူးတွေဟာ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်တွေကို အပြင်းအထန် ဝေဖန် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ဒုက္ခကြီး ပြဿနာကြီးကို ဖြေရှင်းပေးမယ့်သူ၊ တနည်းအားဖြင့် မိမိလူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ဘ၀မှ ကယ်တင်ပေးခဲ့သူကတော့ မုဆိုးမလေး ဂျူးဒစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးဒစ်ဟာ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေသူ၊ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေကို ချစ်မြတ်နိုး၊ တန်ဖိုးထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးထုံးစံအရ ခင်ပွန်း သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် မုဆိုးမအဖြစ်နဲ့ (၃) နှစ် (၄)လကြာ အိမ်တွင်း အောင်းနေခဲ့ရပါတယ်။ စည်းစိမ် ဥစ္စာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝပေမယ့်လို့ ဖျင်ကြမ်း အ၀တ်ကို ၀တ်ပြီး တဲလေးနဲ့ နေခဲ့တယ်။ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ လှပပေမယ့်လို့ မပြင်မဆင်၊ မဖီးမလိမ်းဘဲ၊ အစာရှောင်၊ ၀ါရှောင်ပြီး ခြိုးခြံ နေထိုင် အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။
မိမိ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တဲ့ ဂျူးဒစ်ဟာ ဂျူးတိုင်ပြည်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့
စွန့်စားခန်းကြီးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုး အကြီးအကဲတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီး ရန်သူ့ နယ်မြေထဲကို သွားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်လှပမှုနဲ့ စကားပြောပြေပြစ်မှုကို အသုံးချပြီး ရန်သူဖြစ်တဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးထံကို ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်။ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ပြီး ထောင်သောင်းမကတဲ့ စစ်သားတွေကြားထဲမှာ မိမိရဲ့ အရှက်နဲ့ အသက်ကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး သူမရဲ့ အစေခံ မိန်းကလေးနဲ့ အတူ သွားခဲ့တယ်။ သူမ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ထာဝရဘုရားရဲ့ လက်တော်ထဲမှာ အရာရာကို အပ်နှံကာ ဂျူးလူမျိုးတွေ အားလုံးအတွက် သူမဘ၀ကို လောင်းကြေး ထပ်ရဲခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှပမှုကြောင့် စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီး ဟိုလိုဖန်းနေဟာ သူမကို အခွင့်အရေးတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ စကားပြော လိမ္မာပါးနပ်မှုကြောင့် သူမ ပြောစကားတွေကို ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျူးဒစ်ဟာ ရန်သူတွေကြားထဲမှာ ရောက်နေပေမယ့်လို့ ဘုရားဝတ်ပြု ဆုတောင်းရမယ့် အချိန်ကိုတော့ မပျက်မကွက်ပဲ သစ္စာရှိစွာ ဆုတောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီးကို မိမိရဲ့ မာယာကျော့ကွင်း သတိပညာရှိစွာနဲ့ အစွန်းအထင်းမဲ့စွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် ချစ်တဲ့စိတ်၊ သစ္စာစောင့်သိတဲ့စိတ်ကို အရင်းခံပြီး ဘုရားကို အားကိုးကာ ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ နောက်ဆုံး စစ်သေနာပတိချုပ်ကြီး ဟိုလိုဖန်းနေရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျူးဒစ်ရဲ့ အနစ်နာခံမှုနဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့် ရန်သူကို အညံ့ခံရတော့မယ့် အခြေအနေကနေ ဂျူးလူမျိုးတွေ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည် ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ အနစ်နာခံ ပေးဆပ်တတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ယနေ့တိုင် ထင်ကျန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးအမျိုးသမီးလေး ဂျူးဒစ်ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးမှုကြောင့် ဂျူးနိုင်ငံတွေဟာ တိုင်းတစ်ပါး နယ်ချဲ့တွေရဲ့ သွေးစုပ် ချယ်လှယ်မှုအောက်ကနေ လွတ်မြောက် ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂျူးဒစ်ကို ဂျူးလူမျိုးတွေ အားလုံးက လေးစား ချီးကျူးခဲ့ကြတယ်။ သူမဟာ အသက်(၁၀၅) နှစ် တိုင်တိုင် မုဆိုးမဘ၀နဲ့ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ မသေဆုံးမီ သူမ ပိုင်ဆိုင်ရာ အရာတွေကို နှစ်ဖက်သော ဆွေမျိုးတွေကို ခွဲဝေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမ သေဆုံးတဲ့အခါ ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ (၇) ရက်တိုင်အောင် ငိုကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။
စာရှုသူ အပေါင်းတို့ရှင် ဒီလို အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ မိန်းမသားပင်ဖြစ်လင့် စကား၊ မိမိရဲ့ ရရှိထားတဲ့ မိန်းမသားဘ၀ကို အသုံးချပြီး တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်၊ တနည်းပြောရရင် အများအတွက် မိမိရဲ့အသက်နှင့်အရှက်ကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး ကြိုးစား ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ဂျူးလူမျိုး သူရဲကောင်းမလေး ဂျူးဒစ်ရဲ့ အကြောင်းကို ထောက်ရှုနိုင်ဖို့ တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
စာရှုသူအပေါင်းလည်း အများအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:13 PM
သမ္မာတရားနှင့် စပ်ဆိုင်သမျှသော သူတို့သည် ငါ့စကားကို နားထောင်ကြသည်
အထက်ပါယေဇူး၏ စကားများဟာ စတုတ္ထ ဧ၀ံဂေလိကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင်ရဲ့ အခန်းကြီး ၁၈၊ အခန်းငယ် ၃၇မှ ထုတ်နုတ်ထားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိထံ တရားစီရင်မှု ခံယူဖို့ရန် အပို့ခံရတဲ့ ယေဇူးခရစ်တော်ကို မြို့ဝန်မင်းပိလတ်က မေးမြန်း စစ်ဆေးရာ ကိုယ်တော်မြတ်က ဖြေဆိုခဲ့တဲ့စကား အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားတော်များကို နားလည်ဖို့ ရှေ့မှာပါတဲ့ စကားစပ်နှင့် ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်မယ်။ ပိလတ်မင်းဟာ တည်ကြည်ဖြောင့်တန်းတဲ့ စရိုက်မျိုး မရှိ၊ သူဟာ ဇဝေဇ၀က် မတင်မကျရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ခရစ်တော်က မိမိဟာ သမ္မာတရားကို သက်သေခံဖို့ရန် ဤလောကသို့ ကြွလာသူဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူခဲ့တယ်။ ခရစ်တော်အတွက် သမ္မာတရားတည်း ဟူသော မှန်ကန်ခြင်းတရားဟာ မိမိ ခမည်းတော်ဘုရားထံမှ ခံယူရရှိထားတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်တယ်။ ဒီနှုတ်ကပတ်တော် ဆိုရာ၌လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀သက်တာရဲ့ အစစ်အမှန်ဖြစ်သော အဓိပ္ပါယ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဦးတည်ကြရမယ့် ပြည့်ဝ စုံလင်တဲ့ အသက်တို့ကို ဖွင့်လှစ် ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ရန် ခမည်းတော်ဘုရားက ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ကမ္ဘာလောကဆီသို့ စေလွှတ်လိုက်တဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးဟာ ပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ ထာဝရအသက်တော်အတွက် ဖန်ဆင်းထားခံရကြတယ် မဟုတ်လား။
အဲတော့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်ပြောချင်တာက ကိုယ်တော်ဟာ သမ္မာတရားကို သက်သေခံရာ၌ ခမည်းတော်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လုံးဝ အတိမ်းအစောင်းမခံဘဲ ၎င်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို တထေရာတည်း ရှိစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ တင်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ “သမ္မာတရားနှင့် စပ်ဆိုင်သမျှသော သူတို့သည် ငါ့စကားကို နားထောင်ကြသည်။”
ဒီ နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့အနက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည် သဘောပေါက်လာပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ သမ္မာတရားဖြစ်လို့ ကိုယ်တော့်ကို နားလည် လက်ခံဘို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သမ္မာတရားဘက်က ရပ်တည်ကြရမယ်။ တနည်းအားဖြင့် သမ္မာတရားနှင့် အတူ တသံတည်း ထွက်ရမည်။ စစ်မှန်တဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်တဲ့ သမ္မာတရားဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဒုတိယဇာတိဖြစ်ပါမယ့် အချက်ပါပဲ။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းနှင့် ရက်ရက်ရောရောရှိကြရင် ခရစ်တော် ယေဇူးကို မြတ်နိုးတမ်းတခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသားအတွင်း စမ်းရေပမာ တသွင်သွင် စီးလာမယ်။ အလိုအလျောက် ကိုယ်တော့်ဘက် ရွေ့လျားလာပြီး သူ့ ဗျာဒိတ်တော်သံကို နားဆင်လာမယ်။ ကိုယ်တော့်အသံက လွဲလို့ အခြားအခြားသော အသံများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အသံများကို ရှောင်ရှားလာကြမယ်။ ဒီလိုနဲ့ အတွေ့အကြုံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခရစ်တော်သာလျှင် သမ္မာတရားနှင့် အသက်၏ ပြည့်စုံခြင်း၊ ဘ၀ပြဿနာကြီးများရဲ့ အဖြေနှင့် လူ့နှလုံးသား ဆာလောင်မှုကြီးရဲ့ ဖြည့်စွက်ပေးချက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြပါလိမ့်မယ်။ “သမ္မာတရားနှင့် စပ်ဆိုင်သမျှသော သူတို့သည် ငါ့ စကားကို နားထောင်ကြသည်။” ဆိုတာကို ကြားနာပြီး ၎င်းအပေါ် သစ္စာရှိခြင်း၊ မှန်ကန်တဲ့ ကောင်းမြတ်မှုဟူသမျှ အပေါ် စိတ်သဘောထား ကြီးမြတ်ခြင်း- စသည်တို့ဟာ ခရစ်တော်ယေဇူးကို နားလည်ရာ၌ အဓိက မရှိမဖြစ်တဲ့ လိုအပ်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။
COMPROMISE လို့ခေါ်တဲ့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်မှုကင်းခြင်း၊ မတင်မကျ မရေမရာပြုမူတတ်ခြင်းတို့ အန္တရယ်မှ ဒီ နှုတ်ကပါတ်တော်က ကာကွယ်ပေး နေပါတယ်။ ခရစ်တော်ကို နားလည် လိုက်နာရာ၌ ခရစ်တော် ဧ၀ံဂေလိကျမ်းနှင့် လောကနည်းရာပုံစံများကို မကိုက်ညီသော်လည်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဖက်စပ်ပေးခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးပေါ်ထိုင်နေခြင်း ဆိုတဲ့ “သောင်မတင် ရေမကျ” ပြုလုပ်နေခြင်းမျိုးများလောက် ခရစ်တော် သမ္မာတရားကို ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်နေသောအရာ မရှိပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခရစ်တော်၏ မြွတ်ကြားချက်တို့ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထင်သလို ဆက်စပ်ပေးခြင်းများ မလုပ်ဘဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ မှန်ကန် တင့်တယ်မှု၊ သပ္ပါယ်လှပမှုကို ရှုမြင် နားလည်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၌ ၎င်းအသီးအပွင့်များကို လက်တွေ့ ခံစားနိုင်ကြပါမယ်။
လက်တွေ့ကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရှင်မာတေဦး ခရစ်ဝင်ကျမ်း အခန်းကြီး ၅ ၊ အခန်းငယ် ၉ မှာ ခရစ်တော် မြွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ “ခိုက်ရန်ကို မလိုလားသောသူတို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြ သူတုိ့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဟု ခေါ်ဝေါ်ခံရမည်။” ဆိုတဲ့ စကားကို ကျင့်သုံးကြပါစို့။ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလည်း သွားလေရာရာ၌ ယူဆောင် သွားကြပါစို့။ “သမ္မာတရားနှင့် စပ်ဆိုင်သမျှသော သူတို့သည် ငါ့စကားကို နားထောင်ကြသည်”
ဘုန်းဘုန်း အက်ဒွက် ဦးစိန်မြင့်
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:01 PM
မစ္ဆားတရားတော်အတွင်းမှာ ရဟန်းတော်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ သိုးငယ်တော်ကို ကျွန်တော်တို့အားပြပြီး ထာဝရအသက်ကို ဝေငှဖို့အတွက် စားပွဲသို့ ကျွန်တော်တို့အား ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ထာဝရအသက်ဆိုတာဟာ ခရစ်တော်သခင်ရဲ့အသက်တာကို ဝေငှပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှ အဖဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းကြပါတယ်။ တနင်္ဂနွေဘုရား ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာဆိုရင် ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ အသက်တာကို ကျွန်တော်တို့တတွေ ကြိုတင် မြည်းစမ်း ခံစားကြရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ မိမိနေရာက ထပြီး ကိုယ်တော်မြတ်ရှိရာ ပလ္လင်ဆီသို့ စီတန်းပြီး သွားကြတဲ့ အချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ဘ၀အတွက် တကယ်ကို အသန့်ရှင်းဆုံးအချိန် တခဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကလေးအတွက် သတိတရနဲ့ ကောင်းကောင်း ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ လူတွေကို စောင့်နေစဉ်မှာပဲ ခရစ်တော်ယေဇူးဘုရားရှင်ကို အာရုံပြုပြီး ဆုတောင်းကြရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးဟာ ခရစ်တော်ယေဇူးရှင်ထံ ဦးတည်သွားနေတဲ့ ခရီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူရန် တန်းစီပြီး သွားကြတဲ့လူစု၊ လူတန်းကြီးဟာ ၎င်းဘ၀ခရီး အသက်တာကို ဖော်ကျူးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရပ်ပြီး စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ခရစ်တော်ယေဇူးရဲ့ နောက်ဆုံး ညစာစားပွဲ၌ တပည့်တော်ကြီးများနှင့် အတူရှိနေပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရစ်တော် ယေဇူးရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းကို ခံကြရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ကမ်းခြေမှာ တပည့်တော်ကြီးများနဲ့ နံနက်စာ စားကြသလို ဒါမဟုတ် မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ကို ပွားများစေပြီး လူတွေကို ဝေငှ ကျွေးသလိုမျိုး ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကျွေးမွေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူခါနီးအချိန်မှာ ပလ္လင်ရှေ့၌ ဒူးထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားအမူအရာတစ်ခုခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီကြွလာမယ့် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူတဲ့အခါ “အာမင်”လို့ ပြောခြင်းဟာလည်း ခရစ်တော် ဘုရားရှင် အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကို ယုံကြည်တဲ့ အကြောင်း ၀န်ခံခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ခရစ္စတူး အမှတ်အသားပြုလုပ်ပြီး ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ ဒီလို ခရစ္စတူးအမှတ်အသား ပြုလုပ်ခြင်းဟာလည်း ခရစ်တော်ဘုရားရှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ရယူခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တတွေ ဝေငှ ခံစားကြရကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့တတွေ ခရစ်တော်ယေဇူးနဲ့ တစ်လုံးတ၀တည်း ပေါင်းစပ်ခွင့် ရကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတစ်ဦး တစ်ယောက်စီအတွက် ခရစ်တော်ယေဇူးက ပေးတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကျေးဇူးလက်ဆောင်အားဖြင့် ခရစ်တော်ယေဇူး၌ ကျွန်တော်တို့ဟာ အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ယေဇူးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ပါဝင် ပေါင်းစပ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံးအချိန် တစ်ချိန်ကတော့ ကိုယ်တော်မြတ်ပင့်ယူပြီး ကိုယ့်နေရာကို ပြန်လာတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို ခရစ်တော်ယေဇူးကြွလာခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရစ်တော်ယေဇူးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စက္ကရမင်တူးကို ရကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကို လက်ခံ ရရှိကြပါတယ်။ နောက်ပြီး အရှင်သခင်တို့ရဲ့အရှင် ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်ကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိကြပါတယ်။
ဒီ နက်နဲရာအချက်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အကျိုးသက်ရောက် ခံစားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်က
လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာ ဆုတောင်းခြင်းသာလျှင် တတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားလေ ဘုရားသခင်ကို ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်လေ၊ ပိုပြီး ချစ်လေ၊ ပိုပြီး ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးအဖြစ် အခြေအနေကို ဘုရားသခင်ထံ ဖွင့်ဟ ပြလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် “ကိုယ်တော်မြတ် ပင့်ယူပြီးအချိန်ဟာ ၀ိညာဉ်အတွက် အရမ်းကို အကျိုးထူးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ”လို့ အာဗီလာမှ စိန်ထရေဇား (St. Teresa of Avila) က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအချိန်ကလေးမှာ ခရစ်တော်ယေဇူးကို အာရုံပြုပြီး ကုန်လွန်စေမယ်ဆိုရင် သူ့ကို ကောင်းကောင်းအစေခံတာနဲ့ အတူတူ ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်ကလေးကို ဆုံးရှုံးမသွားအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိတဲ့အချိန်၊ ဘုရားရှင်နဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာမျက်စိကိုပိတ်ပြီး ၀ိညာဉ်မျက်စိကို ဖွင့်ထားကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲကို မြင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရပါမယ်။
ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်နဲ့ တပေါင်း တစည်းတည်းဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ပါဝင်တဲ့ အသင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ယေဇူးရဲ့ နက်နဲရာ ခန္ဓာတော်နှင့်လည်း တစ်လုံး တစ်စည်းတည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ပင့် ယူချိန်မှာ သီဆိုကြတဲ့ ဓမ္မသီချင်းဟာလည်း ကျွန်တော်တို့တတွေအကြား တပေါင်းတစည်းတည်းရှိခြင်းကို ပြန်လည် သတိရစေပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်တင်ခြင်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်မြတ်ကို အားလုံးပင့်ယူပြီးတာနဲ့ တခဏမျှ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ နေကြရပါတယ်။ ဒီ အချိန်ကလေးဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီအတွက် မိမိ လိုချင်တဲ့ဆုကို တောင်းခံဖို့ လိုအပ်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေရဲ့ ဆူညံမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ စကားသံကို ကြားနိုင်ပါတယ်။ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့အချိန် ကလေးပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရရှိပြီးတဲ့ ကျေးဇူးတော်များအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ယေဇူးရဲ့ တည်ရှိတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေ အကျိုးကျေးဇူး ပိုမို ရရှိဖို့ရန်နှင့် ပေါင်းစပ်သလို နောင်တစ်နေ့မှာလည်း ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခရစ်တော် ယေဇူးဘုရင်နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ဖို့ ဆုတောင်း ကြပါတယ်။
မစ္ဆားတရား ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ခရစ်တော် ယေဇူးဟာ ကျွန်တော်တို့အထဲ၌ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ခွန်အား ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့ အညီ နေထိုင်နိုင်အောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် မစ္ဆားတရားအပြီး ဘုရားရှင် ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူရှိဖို့ အထူးသဖြင့် လာမည့်အပတ်အတွင်းမှာ တွေ့ကြုံရမယ့် ဒုက္ခ အခက်အခဲ ပြဿနာများ၌ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ရှိဖို့ရန်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ၌ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ရှိဖို့ရန်၊ နတ်ဆိုးရဲ့ အပြစ်ဒုစရိုက်မှ ကာကွယ်ပေးဖို့ရန် ဆုကျေးဇူးတော်များကို တောင်းခံ သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀ အသက်တာ တစ်ခုလုံးမှာ ခရစ်တော်ယေဇူးရှင်နဲ့ အစဉ်အမြဲ ပေါင်းစပ် သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဆုတောင်းနိုင်ဖို့၊ သဒ္ဓါ ကြည်ညိုခြင်း ပြုနိုင်ဖို့အတွက် ခရစ်တော်ယေဇူးဟာ ကိုယ်တော်မြတ် စက္ကရမင်တူး၌ အပြည့်အ၀ အမှန်တကယ် တည်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဒ္ဓါ ကြည်ညိုခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ခရစ်တော်ယေဇူးထံ သီးခြား အလည်အပတ်သွားခြင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေအားဖြင့် မစ္ဆားတရားအတွင်းမှာ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ပင့်ယူခြင်းမှ စတင်ခဲ့တဲ့ ခရစ်တော် ယေဇူးဘုရားရှင်နဲ့ ပေါင်းစည်းခြင်းကို ဆက်လက်ပြီး ရှင်သန်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း တိုးပွားစေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကိုယ်တော်မြတ် ပင့်ယူခြင်း၌ ခရစ်တော် ယေဇူးဘုရားရှင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို ကြွလာခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေမှာ ဆထက်တပိုး ပိုမိုပြီး တိုးပွားစေပါတယ်။
Translated by J.Bo Htun
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:55 PM
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:58 PM
တစ်ခါက တရားဟောရာမှာ ပြောင်မြောက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လူအများ နားဝင်အောင် ယုံကြည် လက်ခံလာအောင် ဟောပြောနိုင်တဲ့ တရားဟော ဆရာတစ်ဦးဟာ အလွန် ခမ်းနား ကြီးကျယ်အောင် တထူး တခြားပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့တရားကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဟောကြား လိုက်ပါတယ်။ တရားပွဲ အပြီးမှာတော့ များပြားလှတဲ့ တရားနာ ပရိသတ်ကြီးက ၀ီစီတွေ မှုတ်၊ လက်တွေဝှေ့ရမ်း၊ လက်ခုပ် သြဘာသံတွေ ကျယ်ကျယ်လောင် လောင်တီးကြပြီး သူ့ကိုလည်း ဓာတ်ပုံတွေ တဖျတ် ဖျတ်နဲ့ ရိုက်၊ အထူးတလည် ချီးမွမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းတွေ ပြု၊ ကျေးဇူးတွေ အများကြီး တင်ကြနဲ့ပေါ့။
အဲ့ဒီလို လူအများရဲ့ သြဘာပေးခြင်း၊ ချီးမွမ်း ထောပနာပြုပြောဆိုခြင်းတွေကို ခံရတဲ့အခါမှာ တရား ဟော ဆရာကြီးဟာ ရုတ်တရက် ဇာတ်စင်ရဲ့အနောက်ကို အပြေးဝင်လာပြီး အတော်လေး ၀မ်းနည်း ကြေကွဲမှု ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ သည်းသည်းထန်ထန် ငိုကြွေး ပစ်လိုက်တာကို သူ့ရဲ့ တပည့်လေးတစ်ယောက်က အံ့ သြစွာနဲ့ သွားပြီးတွေ့မိလိုက်တယ်တဲ့။ ဆရာကြီးရဲ့ အောင် မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှုနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေကို အမြဲတမ်းပဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ တပည့်လေးက "ဆရာကြီး ခင်ဗျာ... ဘာလို့ ငိုရတာလဲခင်ဗျာ... ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာကြီးရဲ့ တရားဟောပွဲ တွေ လုပ်သမျှ အရာတိုင်းတွေဟာ အောင်မြင်ခဲ့တာ ချည်းပါပဲ။ အခုပွဲမှာလည်း အတိုင်းထက် အလွန် အောင်မြင် စည်ကားခဲ့တယ်။ မျက်နှာပန်း လှခဲ့တယ်။ လူကြိုက် များခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးအတွက် လက်ခုပ် သြဘာသံတွေ၊ ချီးမွမ်းခြင်းတွေ၊ ကျေးဇူးတင်ခံရမှုတွေ အများကြီးပဲလေလို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဆရာကြီးက အေး ဟုတ်တယ် . . . အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့ ငါ ငိုတာကွ။ ၀မ်းနည်းနေရတာ၊ ကြေကြေကွဲကွဲကို ခံစားနေမိတာပါ။ တစ်ကယ်တော့ . . . ဒီအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တရားတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ပြောစကားတွေ ငါလုပ်သမျှအရာတွေ အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ဆီက လာတာပါ။ ဘုရားရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပါ၊ ငါ့အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ဘုရားရဲ့ သနားခြင်း ကရုဏာတွေပါ ငါ့ဆီမှာရှိတဲ့ အကောင်းတိုင်းဟာ ဘုရားပိုင်တာတွေပေါ့ ဘာမဆို အကုန်လုံးဟာ ဘုရားပေးလို့ဖြစ်တာတွေ ချည်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် များစွာသော ပရိသတ်တွေနဲ့ ငါ့အနားမှာ ရှိနေသူတွေ တစ်ချို့က ဘုရားကို အသိအမှတ် ပြုရမှာ ဦးထိပ် ပန်ဆင်ချီးမွမ်းရမှာ သြဘာပေးရမှာ၊ ကျေးဇူးတင်ရမှာကို မေ့လျော့နေကြတယ်၊ မသိချင် ယောင်ဆောင်နေကြတယ်၊ ငါ့ကိုပဲ ၀ိုင်းပြီးသည်းသည်းလှုပ် ချီးမွမ်းမြှောက်ပင့်ပြောဆိုပြီး သြဘာပေးနေကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြကြယ် စံပြပုဂ္ဂိုလ်၊ သူရဲကောင်းလို့ ကင်ပွန်းတပ်ကြတယ်။ ငါလုပ်ကိုင် ကြံစည်ဆောင်ရွက်တာ၊ ဆုံးဖြတ်ပြောဆိုတာတွေ မှားနေရင်တောင် သိသိကြီးနဲ့ထောက်ခံပေးနေကြတယ်။ အနာဂတ် ကောင်းစားရေးအတွက် အမှန်ကိုပြောပြကြဖို့ "ယုန် ကလေးနှာစေးနေပါတယ်" ဆိုတဲ့ စကားပုံလို နေထိုင် ကျင့်ကြံကြတယ်၊ ဒါတွေကြောင့် ငါ ငိုနေရတာပါကွာလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်တဲ့။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ ထပ်ပြီးပြောသွားတာက မင်းမြင်ခဲ့တဲ့၊ ကြားသိထားပြီးတဲ့ ငါ့ရဲ့အောင်မြင်မှု၊ ထင်ပေါ်ကျော်စောမှု၊ လူအများရဲ့ ချီးမွမ်း သြဘာပေးမှုဆိုတာတွေကို ဘယ်သူခံထိုက်လဲ၊ ဘယ်သူ မူပိုင်လဲ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အသေအချာ လေးနက်စွာနဲ့ပေါ့၊ ငါ့အနေနဲ့ကတော့ လူတွေက ငါ့ကို ချီးမွမ်းလေ၊ ကျေးဇူးရှင်လို့ ခေါ်လေ ဘာမဆို ကြိုက်တာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလေ ဘုရားကိုစော်ကားနေသလိုဖြစ်ပြီး ဘုရားရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေကို ငါခိုးနေသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါက ဒီဘ၀အတွက် ဘုရားရဲ့ အလိုကျ၊ လောကမှာ ဘာမဆိုဖြစ်ကြရတာမို့ "ဘုရားမှတစ်ပါး၊ အခြား ၀ါကြွားစရာအကြောင်း မရှိ"လို့ပြောပြီး အဝေးတစ်နေရာကို သူထွက်သွားခဲ့ပါ တယ်။
စာဖတ်သူ . . . သင့်ဘ၀မှာရော
အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ရင် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာနေရင်၊ ရာထူး ကြီးကြီးမားမား ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သြဇာ အာဏာပေး လောက်တဲ့ အဆင့်ကို ပိုင်ထားရင် ဒီအရာတွေကို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လို အသုံးပြုဖို့ စိတ်ကူးထားပါသလဲ ဒါမှမဟုတ် လက်တွေ့ အသုံးချခွင့် ရနေသူ ဆိုရင်လည်း ဘုရားသခင်က သင့် စိတ်ထားနှလုံးသားရဲ့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အဆင့်အတန်းမှာ ထားနေသလဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူ့ရဲ့ တာဝန်ယူ တတ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မြို့တော်ရဲ့ အနှစ်သာရဟာ မြို့သူမြို့သားတွေသာဖြစ်တယ်။ မြို့ကို ကာရံထားတဲ့ တံတိုင်းတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မတော့ ထင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ အမှန်တစ်ကယ် မျက်နှာရဖို့ ချိုးဖဲ့၍ ဝေမျှသော အသက်တာဖြင့် နေထိုင်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြရင်း -
"သင်မူကား တိုးတက် ရမည်၊ ငါမူကား ဆုတ်ယုတ်ရမည်"ဆိုသော သမ္မာတရား အလင်းစကား အတိုင်းပေးဆပ် ဆက်ကပ်သွားကြပါစို့။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:46 PM
အို . . . . ကရုဏာရှင်လေး
အို . . . . ကရုဏာရှင်လေး။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ဝေဒနာခံစားသူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများနှင့် သူနာပြုဆရာမ၊ ဆရာမများအား ဂုဏ်ပြုအားပေးခြင်းဖြင့် -
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 2:33 PM
ကိုယ်တော်ရှင်ပေးသော ၀ိညာဉ်အား ကိုယ်တော်ရှင် ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လေသော အဖြစ်သည် ထူးပြီးအဆန်း မဟုတ်သော်လည်း တန်ဖိုးရှိသော လောက လူသားတစ်ဦး ဆုံးရှုံးသွားခြင်းသည် တန်ဖိုး ထားသော ကျန်ရစ်သူများအတွက်မူ အစားထိုး၍ မရလေသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ “သင်သည် မြေမှုန့်မှလာ၍ မြေမှုန့်သို့ ပြန်သွားရမည်။ ”ဟု အစဦးကပင် ကိုယ်တော်ဗျာဒိတ်ရှိသော်လည်း ကြွေလွင့်ပန်း ပွင့်တိုင်းအတွက် သူ ခိုနားဖူးသော မြေကြီး၊ သူအလှ ဆင်ဖူးသော ကောင်းကင် ၊ သူဝတ်ရည် ပေးဖူးသော လိပ်ပြာများမှ ထာဝစဉ် အမှတ်ရနေမည်မှာ အမှန်တရားတစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
လောကကမ္ဘာထဲတွင် လူသားတစ်ဦးအဖြစ် မွေးဖွားလာရန်သည်ပင် အလွန်ပင် ခက်ခဲသော
ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ တစ်နည်းဆိုသော် ကိုယ်တော်ရှင် ပေးသနားသော လက်ဆောင်မွန်ကို ရရှိရန်သည် မလွယ်သောအရာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုနက်နဲလှစွာသော လက်ဆောင်မွန် လူသားလေး ရရှိခဲ့ပြန်လည် မြင့်မြတ်သန့်စင်သော ရဟန်းရှင်တစ်ပါးအဖြစ် ခေါ်တော်မူခြင်း ရရှိရန်သာ၍ပင် ခက်ခဲသော အရာဖြစ်ပေသည်။ သားပေါင်းတစ်ထောင်တွင် တစ်ပါး (သို့) တစ်သောင်းတွင်ပင် တစ်ပါး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရဟန်းဘောင် တနည်းသူတော် စင်ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်လာသော လူငယ်များစွာထဲမှ တစ်ပါးဖြစ်ရန် ကိုယ်တော်ခေါ်မှ ပလ္လင်ရွှေနန်းထက်မှာ အဖိုး မဖြတ်နိုင်သော တစ်ပွင့်ပန်းလေး နှစ်ပွင့်မကြာသော မခြားသော ကာလလေးအတွင်း ကြွေလွင့်သွားခြင်းမှာ သာသနာအတွက် အလွန်နစ်နာသော ဖြေမပြေနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
လူလောကတွင် နေထိုင်ရှင်သန်နေသော လူသား အတော်များများသည် ကိုယ်တော်ရှင် ပေးသနားတော်မူသော အသက်ဝိညာဉ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအား တန်ဖိုး မထားတတ်ကြပေ။ ရှင်သန်နေထိုင်နေစဉ်၌ ကိုယ် ကာယအတွက် ဉာဏ်သုံး၍ ကျုန်းမာရန် မနေတတ်ရုံ မျှမက ၀ိညာဉ်အား တန်ဖိုးရှိစွာ ကောင်းကင်ရွှေပြည်သို့ မျှော်မှန်း၍ ဂရုမစိုက်ကြပေ။ ကျန်းမာရေး ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာဉ်ဆုံးရှုံးမှသာ မည်သို့ပြုရမှန်း မသိဖြစ်တတ်ကြပေသည်။ ထိုသို့သော လူများစွာထဲမှ ထူးခြားလှစွာသော ကိုယ်တော်ပေးသည့် ကာယနှင့်ဝိညာဉ် အတွက် သေလွန်ခါနီးအထိ အရှုံးမပေး တိုက်ပွဲဝင် စောင့်ရှောက်သွားသော ပန်းတစ်ပွင့် ရှိခဲ့လေသည်။ ဝေဒနာကို အားတင်း၍ ကိုယ်တော်ပေးသနားခဲ့သော ကာယနှင့် ၀ိညာဉ်နှစ်ပါးအား နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အားမလျှော့ အပြုံးမပျက် သာသနာအတွက် ထမ်းဆောင်ရအုံးမည့် တာဝန်များ ပြောဆိုကာ ဇွဲတင်းရှာသော ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်ပေသည်။ ရောဂါဒဏ်ကို စတင် ခံစားရသော အချိန်မှစ၍ သေဆုံးချိန်တိုင်အောင် ထို ပန်းပွင့်လေးနားနေ ညှိုးနွမ်းနေခြင်း မမြင်ရခဲ့ဘူးပေ။ ကျန်းမာနေသူများထက်ပင် ရွှင်လန်းစွာ ရဟန်းတစ်ပါး၏ ဆောင်ရွက်ဖွယ် ကိစ္စတာဝန်များ ထမ်းဆောင် နေသည်သာ မြင်ရပေသည်။ ရေရှည် စီမံကိန်းများကိုပင် အစီအစဉ်ဆွဲကာ ရောဂါကိုမေ့၍ အစဉ်တလှုပ်လှုပ် အလုပ်များနေခဲ့ပေသည်။ ခေတ္တတည်းခိုနေသော ကျောင်းတော်ကြီးကိုပင် နေထိုင် မကောင်းသော်လည်း သာယာလှပစွာဖြင့် ဂျုဗလီပွဲတော်ကြီးအား ကြိုဆိုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သေးသည်။ ထိုမြို့လေးရှိ ကျောင်းခွဲလေးသို့လည်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တတ်နိုင်သော ခွန်အားလေးဖြင့်ပင် လာရောက် တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ပေသေးသည်။ ဝေဒနာ၏ နှိပ်စက်မှုဒဏ်အား တန်ဖိုးရှိသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်၍ မေ့ပျောက်နိုင် တွန်းလှန်နေခဲ့ပေသည်။
ထိုပန်းပွင့်လေးသည် ကိုယ်တော်ခေါ်ရန် နှစ်ရက်သာလိုသော အချိန်၌ပင် သေခြင်းကို ကျားကန်၍ ထိုမြို့လေးမှ ဘုရားကျောင်းလေးသို့ တရားလာရောက် ဟောမည်ဟုပင် ပြောနေခဲ့ပေသည်။ သာသနာ့တာဝန်များ တစ်နည်း ကိုယ်တော်ရှင်၏ လုပ်ဆောင်ဖွယ် ကိစ္စများအား ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်သာ အားသန်နေခဲ့ပေသည်။
“ရိတ်သိမ်းရန် များစွာရှိ၏၊ သို့သော် ရိတ်သိမ်းမည့်သူ နည်းလှ၏”ဟု ကိုယ်တော် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရိတ်သိမ်းသူ နည်းလှသည့်ထဲမှ တာဝန်ကျေလှသော ကိုယ်တော်၏ သားကောင်တစ်ပါး ဆုံးရှုံးခြင်းမှာ များစွာ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။ ထိုပန်းပွင့်လေးသည် ရောဂါ မခံစားရခင်ကပင်လျှင် ကိုယ်တော်၏ သားကောင်တစ်ပါးပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကိုယ်တော် မိန့်တော်မူခဲ့သော စကားအတိုင်းပင် ကျောင်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကလည်း နေစရာမရှိ သူအား နားခိုစရာပေး၍ စားစရာမရှိသူအားလည်း အောက်ခြေအထိ ကြည့်၍ ကျွေးမွေးခဲ့သူတစ်ပါး ဖြစ်ပေသည်။
ကြွေလွင့် ပန်းပွင့်လေးအကြောင်းများအား တသသပြောဆို ချီးမွမ်းမည်ဆိုပါက အာကာကို စာရွက်လုပ်၍ မြစ်ချောင်းများကို မှင်ဖျော်ရေးလျှင်ပင် ပြီးဆုံးမည် မထင်ပါ။ ပန်းပွင့်လေး၏ တန်ဖိုး၊ ကျေးဇူးကို သိတတ်သူတိုင်း အနေဖြင့် သူအသက်ရှင်စဉ် ပြသ သွားသော ရှင်သန်နေထိုင်မှုများ သူတန်ဖိုးထား ပြသသွားသော ကိုယ်ကာယနှင့် ၀ိညာဉ်အား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနေထိုင်သွားမှုများအား အတုယူ၍ ကိုယ်တော်ရှင်အား ကျေးဇူးဆပ်၍ ခရစ်တော်၏ သားကောင်း သမီးမွန်များအဖြစ် နေထိုင်ကာ ထိုပလ္လင်ရွှေနန်းထက်မှ တစ်ပွင့်ပန်း (သို့) မြင့်မြတ်သန့်စင် ရဟန်းရှင်တော် အတွက် ဆုတောင်းပေးသွားသင့်သည်ဟု အကြံပြု ရေးသား၍ အနည်းငယ်ပင် ထိုပန်းပွင့်လေးအား ကျေးဇူး ဆပ်လိုက်မိပါတော့သည်။
ကျေးဇူးရှင် အဖဘုန်းတော်ကြီး Rev:Fr. ဦးစိုးလွင်နှင့် Rev:Fr.ဦးမောင်နီတို့အား ရည်ညွှန်းပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:32 PM
မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘယ်မြို့၊ ဘယ်ရွာ၊ ဘယ်တော၊ ဘယ်တောင်သို့ရောက်ရောက် သတိပြုကြည့် တတ်မယ်ဆိုပါလျှင် ၀ိပဿနာတရားစခန်း၊ ဖားအောက် တရားစခန်း၊ မဟာစည်ရိပ်သာ၊ မိုးကုတ်ရိပ်သာစသဖြင့် တောအုပ်အုပ်၊ တောင်ညို့ညို့အောက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားစခန်းများကို တွေ့မြင် ရပါလိမ့်မည်။ “တရားထိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်း”သည် မြန်မာပြည်မှာသာမက ကမ္ဘာ့အရှေ့တိုင်းသားတို့၏ ရိုးရာဓလေ့ဟု
ဆိုရလောက်အောင်ပင် အာရှတိုက် တစ်ဝှမ်း အထူး ထင်ရှားလှပါသည်။ အနောက်တိုင်း ပြည်များမှ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့သည် ရုပ်ဝါဒ လွှမ်းမိုးမှု၊ ဘာသာတရား အနှစ်သာရများနှင့် ထိတွေ့မှု နည်းပါးခြင်း၊ သြတ္တပ္ပတရားများ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ခြင်း များကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်၏ ရိုးရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေသည့် အသက်မဲ့ဓလေ့ (Culture of Dead) ရေစီးကြောင်းထဲမှာ မျောပါလို့ နေကြပါသည်။ အသက်မဲ့စရိုက် ရေစီးကြောင်း တိုက်စားမှုကို အထူးခံရသည့် တစ်ချို့သော တိုင်းနိုင်ငံများမှ လူအတော်များများမှာ သူတို့ အဆိုတကယ့် အမှန်တရား (Real, Reality)၊ လူ့တန်ဖိုး (Value)နှင့် စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို ရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများဆီသို့ ခြေဦး လှည့်နေကြပါသည်။ တရားထိုင်ခြင်း၊ ကမ္မာဌာန်းထိုင်ခြင်းများမှာ စူးစမ်း ချဉ်းကပ်နေကြပါသည်။ “ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ တရားထိုင်ခြင်း ဆိုတာ ရှိသလား” ဆိုသည့် မေးခွန်းမျိုးကို မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိတ်ဆွေများနှင့် စကားလက်ဆုံ ကျမိတိုင်း ကြားရမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားစခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ တရားထိုင်ရင် အပြစ်ဖြစ်ပါလား။” “ကျွန်မတို့ ဘာသာမှာ တရားထိုင်ခြင်း ဆိုတာကို တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး” အစရှိသည့် မြန်မာ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တို့၏ အမေးများနှင့် မှတ်ချက်များကိုလည်း ကြားနေကျ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမိ၊ အဖ၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်၊ ကျောင်းတက်ဖော် ကျောင်းတက်ဖက်များနှင့် တလေးတစား၊ ရင်းနှီး ဖော်ရွေစွာ နေထိုင်ကြလေ့ ရှိသည့် အားလျော်စွာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝင် မထိုင်ဖူးပေသည့် တရားထိုင်ခြင်း၊ ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်း
ဆိုသည်တို့နှင့်တော့ မစိမ်းပါ။ ခရစ်ယာန် တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာကို တစ်ခါမှ မကြားဖူး၊ မမြင်ဖူးကြပေသည့် အာနာပါန ကမ္မဌာန်း၊ ၀ိပဿနာ ကမ္မဌာန်းဆိုသည်တို့နှင့်လည်း ရင်းနှီးနေပြီးဖြစ်၏။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက် တရားစခန်းက ပြန်လာတာတွေ့ရတိုင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းလာတာကို သတိပြု မိနေခဲ့ကြ၏။ “သည်နှစ် သင်္ကြန်မှာ ဟိုမင်းသား၊ ဟိုမင်းသမီးတော့ဖြင့် တရား စခန်းဝင်ပြီး တရားအားထုတ်မလို့တဲ့” ဆိုသည်မျိုးကိုလည်း ဂျာနယ်များမှာ ဖတ်မိ နေတတ်မြဲဖြစ်၏။ သည်လိုနှင့် တချို့ တချို့သော မြန်မာကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များက တရားစခန်းဆိုတာကို အားကျလာကြပါသည်။ တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာကို မြည်းစမ်း အားထုတ်ကြည့်ချင် လာကြပါသည်။ အပြစ် ဖြစ်မလားမသိဘူးဟုလည်း တွေးပူ နေကြပြန်ပါသည်။ ဒုတိယဗာတီကန် အစည်းအဝေးကြီး အပြီး (၁၉၆၀)ပြည့် လွန်နှစ်များတွင် သာသနာ့ အဆုံးအမ စာချွန်တော်များမှာရော၊ ကက်သလစ်ဘာသာ လက်စွဲကျမ်း (CCC) မှာပါ မကျန် သီလဆောက်တည်ဖို့နှင့် ခရစ်ယာန် အသက်တာရှင်သန်စေဖို့အတွက် ဆိုပါလျှင် “တရားထိုင်ဖို့(Meditation or Contemplation)” လိုအပ်ကြောင်း သင်ကြား ပေးလာခဲ့ပါသည်။
“ခရစ်ယာန် တရားထိုင်ခြင်း ဆိုတာရှိလား။ ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့်။ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာ သွားထိုင်နိုင်ပါလိမ့်။ ဘယ်သူများ ပြသ ပေးနိုင်မှာပါလိမ့်။” “အိမ်မှု၊ လူမှု၊ စားမှု၊ နေမှုများနှင့် နေ့စဉ်လုံးပန်းရင်း ကုန်ခမ်း စပြုနေတဲ့ ငါ့ရဲ့ အင်အားတွေ၊ စိတ် စွမ်းအားတွေ၊ ယုံကြည်စိတ်၊ ကြည်ညိုစိတ်တွေ အားပြန်ပြည့်လာအောင် တစ်ရက်စ၊ နှစ်ရက်စ နားနားနေနေ အေးအေး လူလူ တရားအားထုတ်ဖို့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ကျောင်း၊ ဘယ်စခန်းသို့ သွားနိုင်ပါလိမ့် မလဲနော်။ ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာ ခရစ်ယာန်တရားစခန်းဆိုတာ ရှိနေပြီလား။ သိချင်လိုက်တာ။ သွားချင်လိုက်တာ။” အစရှိသည့် စိတ်ကူးများဖြင့် ဗျာများ နေကြရသည့် မြန်မာခရစ်ယာန် အမြောက်အများကို ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ ထူးပြီး ရှာဖွေဖို့လိုမည် မထင်တော့ပါ။ ဤအခြေအနေများကို ရိပ်စားမိသော ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ တောင်ကြီးကက်သလစ် သာသနာပိုင်ချုပ် သုံးပါး၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန် တရားထိုင်သူများအဖွဲ့၏ ဦးစီးနာယက ဘေနဒစ်တင်းရသေ့အသင်းဝင် ရသေ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်လောရင်းဖရီးမင်း (အို၊ အက်စ်၊ ဘီ)နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ခရစ်ယာန် တရားထိုင်အဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ မစ္စတာပီတာလူးတို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် သြဂုတ်လ (၈)ရက်မှ (၁၉)ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် တောင်ကြီးမြို့များတွင် ခရစ်ယာန် တရားထိုင်ခြင်း အကြောင်းကို လှည့်လည် ဟောပြော ခဲ့ကြပါသည်။ အမှန်တွင် ရှေးဦး ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်း ကျင့်စဉ်ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါသည်။ အေဒီ လေးရာစုခန့်က ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် ခရစ်ယာန်ရသေ့ ရှင်ဂျွန်ကာဆီယာန်(John Cassian,Author of Unknowing Cloud, C.1350)၊ ကန္တာရထွက် ရသေ့တွေများ ဖြစ်သော စိန်ဂရေဂေါ်ရီနာစင်ယင်၊ နိစာမြို့သား စိန်ဂရေဂေါ်ရီ၊ ဒီအိုနီးဆီအုစ် (St. Gregory of Nazianzus, St.Gregory of Nyssa, Dionysius the Areopagite) ကဲ့သို့သော အာရှတိုက်သား ရသေ့များ၊ စိန်ထရေးဇား၊ ကားတိုင်တော်ရဟန္တာ စိန်ဂျွန်း၊ ဂျူလီယန်၊ စိန်အီညားစီအုစ်(St.Teresa of Avila, St.John of the Cross,Meister Eckhart, Julian of Norwich, St.Ignatius of Loyola) တို့သည် ခရစ်ယာန် တရားထိုင်ခြင်းကို အားထုတ်ခဲ့ကြသော ရဟန္တာကြီးများ အဖြစ် ထင်ရှား ခဲ့ပါသည်။
အလယ်ပိုင်းရာစုနှစ်များ(Middle Ages) တွင် ခရစ်ယာန်တရားထိုင်ခြင်းဟာ ဟုန်းဟုန်းတောက် ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ချိန်ခါမှာ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်လို့ နေပါသည်။ ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်သော ဘေနေဒစ်တင်း ရသေ့တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဖာသာရ် ဂျွန်မိန်း (Fr. John Main) သည် (၄) ရာစုနှစ်များက ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြသည့် ကန္တာရထွက် ရသေ့ကြီးများ လက်ထက်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သည့် ထိုကျင့်စဉ်ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် ပြန်လည် ဖော်ထုတ် ဆည်းပူးကာ မိမိတို့၏ အသက်တာများ လေးလေးနက်နက် ရှင်သန်နိုင်အောင် အားထုတ် ကြိုးပမ်းနေကြသူများအား သင်ကြား လမ်းညွှန်ပေးခဲ့၏။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန် တရားစခန်း တစ်ခုကို လန်ဒန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်တရား အားထုတ်သူများ အသင်းကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့၏။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာခရစ်ယာန်များကတော့ ကက်သလစ်သာသနာတော်မှာရော၊ မွေးရပ်မြေ၏ ရိုးရာဓလေ့ကနေပါ “တရားထိုင်ခြင်း”ဆိုသည့် တန်ဖိုးကြီး အမွေအနှစ်ကြီးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ သို့ပေမယ့် ထိုဘဏ္ဍာကြီးက မိမိ၏ လယ်ကွင်းထဲမှာ မြုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲ မသိလို့လား၊ သည်လိုမှ မဟုတ်သိသော်ငြားလည်း တူးဖော်ဖို့ကြပြန်တော့ ဟိုအကြောင်းပြ၊ သည်အကြောင်းပြကာ ရောင်းစား ပစ်နေလေရော့သလားလို့တောင် ပြောရမလို ဖြစ်နေပါသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာအရ “တရားထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား၌ ရှိတော်မူသော ယေဇူးဘုရား ကိုယ်တော်အား အာရုံပြုခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ဘုရားဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းတစ်မျိုး (ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းခြင်း တစ်မျိုး) ဖြစ်ပါသည်။ အင်မတန် ရိုးစဉ်းသော ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်၏။ သို့သော် တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်စွာ သတိနှင့် စူးစူးစိုက် အာရုံပြုရတာကြောင့် စိတ်နှလုံး ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ဘုရားရှင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၊ ယေဇူးဘုရား၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ခံစား ရရှိစေပါသည်။ ထိုငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ် အသက်တာ၌ စီးဆင်းလာသောကြောင့် “စိတ်နှလုံး ၀ိညာဉ်၏ အသီးအပွင့်များ”ဖြစ်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ရွှင်လန်း ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ချုပ်တည်း ထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်းတို့ကို ခံစားရရှိ၏။”
ဖါသာရ်လောရင်း၏ ဟောပြောချက်အရ ပြောကြည့်ရမည် ဆိုပါလျှင် “တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်ဘ၀ကြီးနှင့် သင့် ခရစ်ယာန် အသက်တာကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကြွယ်ဝ လာစေနိုင်ပါသည်။ သင့်ဘ၀ အသက်တာနှင့် သင်လုပ်ကိုင်ရာ မှန်သမျှကို ခရစ်ယာန် တရားထိုင်ခြင်းက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရုပ်လုံးဖော်ပေးနိုင်ကြောင်း တရားစထိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတာနှင့် သင်ရိပ်မိ လာပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းကတော့ ယေဇူးဘုရား ထံတော်၌ အထင်အရှား ရှိတော်မူသော ဘုရားရှင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ လက်တွေ့ စတင် ထိသိခံစားရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့် ဆုံတွေ့လာသူတိုင်းက တရားထိုင်ခြင်းဟာ အဲ့သည်လောက် အရေးကြီးလှပါလားဟု လက်ခံ ယုံကြည်လာအောင် အပြောအဟော ကောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်လိုက် ချင်စမ်းပါဘိ။”
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 10:48 PM
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၃)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၂)
ဖါသာရ် ဂျေ ဇေးဗီးယားသည် (၁၉၁၉) မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ မိဖများမှာ ဒီမာရီယာဒါ့စ်နှင့် ဇာဗေရီမူတာမာလ်တို့ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က မိဖများနှနှင့် အတူမန္တလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့လာပြီး စိန်ပီတာကျောင်းတွင် ပညာသင်သည်။ (၁၉၃၇)ခု ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ (၁၉၄၁)ခုနှစ်တွင် ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသို့ လ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၄၇) ခုနှစ်တွင် ကိုရင်အဖြစ်နှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည်။ (၁၉၄၈)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးသံဝင်းရပ် စိန်မိုင်ကယ်ဘုရားကျောင်းတွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူသည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မနော်ယမံတွင် ခေတ္တကျောင်းထိုင်သည်။ ထိုနောက် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၌ ကျောင်းသား တပြည့်များကို(၂)နှစ် ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မန္တလေး မနော်ယမံတွင် (၈)လကြာမျှ ထပ်မံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် မေမြို့ စိန်မေရီခေါ် အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူတော်မူသော သခင်မကျောင်းတွင် (၁၉၅၁)ခုနှစ်မှ (၁၉၆၇)ခုနှစ်အထိ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် သာသနာအမှုတော် ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်များအတွင်း ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားသည် ဆင်းရဲသားများ ကူညီခြင်း၊ မိဖမဲ့ကလေးများကို ပညာသင်ကြားပေးခြင်းနှင့် သီလရှင်များနှနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် စိန်အာလောရှက် ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်နှင့် ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့သော စိန်မေရီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ပြန်လည် မွမ်းမံ ပြုပြင်ခဲ့သည်။
(၁၉၆၇)ခု ဧပြီလ (၄)ရက်နေ့တွင် မိတ္တီလာမြို့ စိန်အန်ထော်နီဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းသည်။ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် ရဟန်းဝါတော်(၂၅)နှစ်မြောက် ငွေဂျူဗလီ ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတော်ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၀)ရက် စနေနေ့နှင့် (၁၁)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားသည် မိတ္တီလာ၊ မြင်းခြံ၊ သာစည်၊ ရမည်းသင်း ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ မိတ္တီလာတွင် ဘုရားကျောင်းနှနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်းကို (၁၉၇၉)ခု ဇွန်လ (၉)ရက်နှင့် (၁၀)ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လာရောက် ကောင်းကြီးပေး ဖွင့်လှစ်သည်။ သာသနာ စည်းဝေးခမ်းမဆောင်ကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သာသနာမြေ ရေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကန်ဘောင်ရိုးကြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားသည် ရဟန်းဝါတော် (၅၀)မြောက် ရွှေဂျူဘလီပွဲတော်ကို (၁၉၉၆)အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မိတ္တီလာ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ (၃၁.၇.၂၀၀၀)ခုနှစ် မိတ္တီလာ၌ ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် ပင်းတိုး (၁၉၀၉-၁၉၈၄)
ဖါသာရ်ပင်းတိုးသည် (၁၉၀၉)ခု ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဂျော့ပင်းတိုး နှင့်အယ်မီလျှံပင်းတိုးတို့ ဖြစ်သည်။ (၁၉၃၉)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၃)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ (၁၉၄၉)ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၄) ရက်နေ့တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူသည်။ ထိုနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် လက်ထောက် စာချပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၆၇)မှ (၁၉၈၃)အထိ မေမြို့ အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော မယ်တော်သခင်မကျောင်း (စိန်မေရီ)တွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၈၄)ခု မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် သြဂုတ်စတွင်း ဦးစို (၁၉၃၀-၁၉၉၇)
(Fr. Augustine U Soe)
ဖါသာရ် သြဂုတ်စတွင်း ဦးစိုသည် (၁၉၃၀)ခု ဧပြီလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ်၊ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဘိုးကြည်နှင့် ဒေါ်ဖြူနုတို့ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာရွာ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး (၁၉၄၇)ခုနှစ်တွင် ဂျပန်တို့၏ ဗုံးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသော မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ပြန်လည်၍ ပြင်နေရစဉ် အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို ပရန်ရွာတော်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်သြဂုတ်စတွင် ဦးစိုသည် (၁၉၄၇)ခုနှစ် မေလဆန်းပိုင်းတွင် ပရန်ရွာတော် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၄၈)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ စိန်အလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီးသဖြင့် ပရန်ရွာတော်မှ ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းသားများ (၁၉၄၈)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် မေမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။ ဖါသာရ်သြဂုတ်စတွင်း ဦးစိုသည် မေမြို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး (၁၉၅၁) ခုနှစ်မှ (၁၉၅၆)ခုနှစ်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်းရှိ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသို့ လ်တွင် ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၅၇) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာပြီး (၁၉၅၈)ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးေ၇ွှနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
(၁၉၅၈) ခုနှစ်တွင် မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ရှိ ပထမဦးဆုံးကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နယ်မှ ကျောင်းသားများ အထက်တန်းပညာ သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဘော်ဒါဆောင် ဆောက်လုပ်၍ ကျောင်းသား (၄၀)ခန့် အထိ ထားရှိခဲ့သည်။ ချင်းဘာသာအားဖြင့် သုဖဖွားအမည်ရှိသော သတင်းကောင်းဟူသော ဘာသာရေး စာစောင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးစိုရောက်စက အိမ်ခြေ (၁၇)အိမ်သာရှိသော်လည်း ဦးစိုပြောင်းရွှေ့မည့် (၁၉၆၅)ခုတွင် အိမ်ခြေ (၈၀)အထိ တိုးတက်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၀)ခန့် ဘာသာဝင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် မန္တလေးမြို့ စိန်ပီတာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် စိန်ဇေးဗီးယား အထက်တန်းကျောင်းတို့မှ အကူအညီတောင်း၍ မိမိကျောင်းနှင့် ကိုက်ညီသော ဥပဒေ စည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲကာ ပြည်မမှ ဆရာ ဆရာမများခေါ်ယူ၍ စိန်ဂျွန်း မူလတန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုရှိသော်လည်း တော်လှန်ရေး အစိုးရက ကျောင်းများ ပြည်သူပိုင် သိမ်းသဖြင့် စိန်ဂျွန်းကျောင်း ပိတ်လိုက်ရသည်။
(၁၉၆၅) ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ စ၍ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ချင်းညောင်ပင်သာ ကျေးရွာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ ညောင်ပင်သာတွင် ကလေးများ
ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ဘကကျောင်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရာ မရသဖြင့် ဆရာများငှားပြီး သာသနာကျောင်းအဖြစ် (၁၀)နှစ်ခန့် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ရွာ၏ အပြင်ဘက်တွင် ကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ပြီး (၂)နှစ်ခန့် တွဲဘက်အဖြစ် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၇) ခုနှစ်တွင် တွဲဘက် မူလတန်းကျောင်း ရရှိခဲ့သည်။ နယ်ရှိ မိရိုးဖလာ လုပ်ကိုင်နေကြသော လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲ၍ ငုတ်ကြို ငုတ်ကြား လုပ်ကိုင်ရသော စနစ်ကို ခေတ်မှီအောင် ငုတ်များရှင်း၍ ထွန်စက်ကြီးများဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်သည် အထိ ပညာပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများကို လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ထမင်းပို့ရုံ ကောက်စိုက်ရုံသာ အသုံးပြုကြရာမှ အမျိုးသားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်း လုပ်ကိုင်လာကြသည် အထိ အောင်မြင်စွာ ပညာပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
နေကြာစိုက်ပျိုးမှု အောင်မြင်သဖြင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ပထမဆုံး စံနမှုနာအဖြစ် နေကြာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သောကြောင့် စံပြဘုန်းကြီးအဖြစ် ရှေ့သို့စာစောင်တွင် မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုနယ်တွင် ဦးစွာ ကြံစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ကျေးရွာတောင်သူ လယ်သမားကြီးများ၏ ဂုဏ်ပြုပွဲတခုတွင် ဆေးဝါးကုဝါသနာပါသောဘုန်းကြီး၊ မွေးမြူရေးဝါသနာပါသော ဘုန်းကြီး၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ထွန်းကားမည့်နှစ်မှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး တိုးတက်အောင် ဦးဆောင်နိုင်သော ဘုန်းကြီးကို ဘုရားသခင်က စေလွှတ်လိုက်တာဘဲဟု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာ သစ်ဖေါ်ထုတ်ရေးနှင့် စပါးအထွက် တိုးရေးအတွက် ရေလှောင်တာ တမံတခု ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ တောင်သူ လယ်သမားများ စိုက်ပျိုးရေး ချောမွေ့စေရန် နွား၊ ကျွဲ၊ မျိုးစေ့များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့သည်။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရန် သက်သာဆိုင်ဖွင့် ပေးခဲ့သည်။ ဆန်ဈေးကြီး၍ ပဲနှင့် ကြွှေဥ ပြုပ်စားနေရသော အချိန်မှာ အောက်ပြည်မှ ဆန်အလှူခံပြီး ဝေငှခဲ့သည်။ ရွာလူကြီးများက ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင် ထမင်းရည်သောက်ရမည့် အချိန်မှာ ဒို့စားဖို့ ဆန်ရှာ ကျွေးတယ်။ ဒို့တသက်မှာ ဒီလိုဘုန်းကြီးမျိုး တွေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဟု ကျေးဇူးတွင် ဂုဏ်ပြု ပြောဆိုကြသည်။ ညောင်ပင်သာရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဖဲဝိုင်း အခြေမတည်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
(၁၉၇၇) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်၊ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၆.၁၁.၇၇)စိန်ဇေးဗီးယား သာသနာရေး ကောင်စီဖွဲ့သည်။ (၅.၁၂.၇၇) နေ့တွင် ပထမဆုံး ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို စိန်ဇေးဗီးယားတွင် ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၈) ခုနှစ်မှစ၍ မိဖများပွဲနေ့ကို စည်ကားသို့ က်မြိုက်စွာ နှစ်စဉ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဗေလန်ကန်နီပွဲတော်ကို ပိုမို စည်ကားစေရန် မြန်မာဘာသာဖြင့် သီချင်း စာအုပ်များ၊ ဆုတောင်းစာများ ရိုက်နှိပ်ခြင်း ဝေငှခြင်း၊ မစ္ဆားအပြီးတွင် ဘာသာဝင် အားလုံး စုပေါင်း၍ ဗေလန်ကန်နီ အလံတိုင်ရှေ့တွင် သီချင်းတပုဒ် သီဆိုခြင်းတို့ကို (၁၉၇၈)ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သည်။ (၂၉.၃.၇၉) ခုတွင် စိန်ဇေးဗီးယား စိန်ဗင်းဆင်းအသင်းကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသည်။ (၁၉၈၃)တွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲတော်ကို စည်ကားသို့က်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်း ကျောက်ပြားများ ခင်းခဲ့သည်။ မှန်စီ ရွှေချဘုရားစင်တခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
စိန်ဇေးဗီးယား ဘုရားကျောင်း ခေါင်းလောင်းစင်ကို (၁၉၉၂)ခု ဒီဇင်ဘာလတွင် တိုးမြှင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ (၁၉၉၃)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ခေါင်းလောင်းစင်ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနား ကျင်းပသည်။ ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်ကြီးကိုလည်း ထိုနေ့၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ နံက်ပိုင်းတွင် ခေါင်းလောင်းစင်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ၍ ညနေပိုင်းတွင် ရပ်ကွက်ထဲ ကိုယ်တော်မြတ် လှည့်သည်။ ဆရာတော်နှင့် ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ တက်ရောက် ပါဝင်ကြသည်။ ရပ်ဝေးမှ လူနာများ ဆေးကုသနိုင်အောင် ဆေးခန်းတစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၈)ခုနှစ်တွင် ရာပြည့်ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်၍ (၁၄.၁.၈၉)နေ့တွင် စိန်ဇေးဗီးယားအုပ်စု နှစ်တစ်ရာ (၁၀၀)ပြည့်ပွဲနှင့် ရာပြည့်ခန်းမဆောင် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖါတီမာမယ်တော်၏ ကျောင်းဆောင်အစား ဗေလန်ကန်နီ မယ်တော်ကျောင်းဆောင်ကို (၁၉၉၃) ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီး စီးခဲ့သည်။
မန္တလေး သာသနာ မာရီယား တမန်တော် ကူရီယားအဖွဲ့၏ ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်း၊ စ်ိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် မန္တလေး သာသနာအုပ်စုကောင်စီ၏ ၀ိညာဉ် လမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်း၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကောလိပ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်းများ ပေးရသည်။ (၁၉၈၃) ခုနှစ်မှစ၍ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဂိုဏ်းထောက် ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း ဦးစိုသည် (၁၉၉၄) ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ မျက်စေ့ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သည်။ (၁၉၉၆) ခု အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ မျက်စေ့ ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၆)ခု နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း ဦးစိုသည် (၁၉၉၆)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)နှင့် (၂၉)ရက်များတွင် အဆုပ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်၍ နှစ်ကြိမ် စစ်ဆေးရာ အဆုတ်တွင် ကင်ဆာရောဂါ လက္ခဏာပြနေကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၉၉၇) ဇန္န၀ါရီ (၃)ရက်နေ့တွင် လေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ သွားကာ (၇.၁.၉၇) မှ (၄.၂.၉၇)နေ့ထိ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသမှုအကြိမ် (၂၀) ခံယူခဲ့သည်။ (၁၆.၂.၉၇)နေ့တွင် လေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေးသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဧပြီလတွင် အခြေအနေ ဆိုးလာသည်။ (၂၃.၄.၉၇) နေ့ကစပြီး ပုံမှန် သတိ မရတော့ပေ။
(၂၅.၄.၉၇) နေ့ နံနက် (၃း၄၅)နာရီတွင် ပျံတော်မူုသည်။
ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း ဦးစို၏ ရုပ်ကလပ်ကို (၂၅.၄.၉၇) နေ့မှ (၁၈.၄.၉၇)နေ့အထိ (၄)ရက်တိုင်တိုင် စိန်ဇေးဗီးယား ရာပြည့်ခန်းမတွင် ခင်းကျင်းထားသည်။ ရပ်ဝေး ရပ်နီးမှ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ကိုရင် သီလရှင်များ၊ မိတ်သင်္ဂဟများ ဘာသာဝင်များတို့သည် နေ့ ညမစဲ လာရောက် ဂါရ၀ပြု ဆုတောင်းကြသည်။ (၂၈.၄.၉၇) ညနေ (၃)နာရီတွင် မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်အောင်၊ ဦးဆောင်၍ ဟာခါး ဆရာတော်နီကောလတ်မာထန်၊ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သီလရှင်များတို့သည်၊စိန်ဇေဗီးယား ရာပြည့်ခန်း မစ္ဆားပူဇော်ပွဲ အခန်းအနား ကျင်းပသည်။ မစ္ဆားပူဇော်ပွဲံတွင် ဆရာတော်ကြီး (၂)ပါး ဘုန်းတော်ကြီး (၄၅)ပါး၊ သီလရှင် (၇၆)ပါး၊ ကိုရင်များ၊ သင်းကွဲ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ၊ ရပ်ဝေး ရပ်နီးမှ ဘာသာဝင်များ စုစုပေါင်း(၂၀၀၀)ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။
မစ္ဆား ပူဇော်ပွဲအပြီးတွင် ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း ဦးစို၏ ရုပ်ကလပ်ကို ရွှေထီးများ မိုးထားသော ပန်းကားလှေယာဉ်ပေါ်တွင် ဆောင်ပြီး ရှေ့ဆုံးမှ ရှေ့ပြေးယဉ်နှင့် ဆရာတော်ကြီးများ၏ မော်တော်ယာဉ်၊ ထိုနောက်မှ ပန်းကားလှေယာဉ်၊ ယင်းနောက်မှ ဘုန်းတော်ကြီးတို့၏ မော်တော်ယာဉ်၊ သီလရှင်တို့၏ မော်တော်ယာဉ်၊ ကိုရင်တို့၏ မော်တော်ယာဉ်၊ ကိုယ်ပိုင် ကားငယ်များ၊ဘတ်စ်ကားကြီးများ၊ စီကာ စဉ်ကာ စနစ်တကျ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ပို့ဆောင်သော ကား အစီးပေါင်း (၉၈)စီးရှိသည်။ ညနေ (၅း၃၀)တွင် ဘုန်းတော်ကြီးအား သင်္ဂြိုလ်မည့် ကြာနီကန်သင်္ချိုင်းသို့ ရောက်ရှိကြသည်။ လိုက်ပါပို့ဆောင်သော ပရိဿတ်ကြီးသည် သင်္ချိုင်းတော်တွင် နေရာယူကြပြီး နောက်ဆုံးဂါရ၀ပြု ဆုတောင်းကြသည်။ ထိုနောက် ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးစို၏ ရုပ်ကလပ်ကို ဂူသွင်း သင်္ဂြိုလ်လိုက်ပါသည်။
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၄)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 2:21 AM
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၁)
(Fr. John U Mg Galay)
ဖါသာရ် ဂျွန် ဦးမောင်ကလေးသည် (၁၉၁၃)ခု ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ဇော်ဂျီရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဘဒင်နှင့် ဒေါ်ကြွယ်တို့ ဖြစ်သည်။ ဤရွာကို (၁၉၀၃)ခုနှစ်က ဖါသာပေလေတီးယား တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်ထွန်းစိန် ဖြစ်သည်။ ဇော်ဂျီရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ပုလိပ်ဘူတာ ချမ်းသာကုန်းရွာတွင် မူလတန်းပညာကို (၅)တန်းအထိ သင်ယူခဲ့သည်။ အသက် (၁၄)နှစ် အရွယ်တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၌ (၆)နှစ်သင်ကြားပြီး နောက် ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် (၆)နှစ် သင်ကြားခဲ့သည်။ ကိုရင်ဘ၀နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာပြီး (၃)နှစ် စုံစမ်းခြင်း ခံရသည်။ မိုးကုတ်နယ်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တို့တွင် နေထိုင်ရသည်။ (၁၉၄၂) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ရဟန်းသိက္ခာခံယြူုပီးနောက် မိုးကုတ်တွင် (၆)နှစ် သာသနာတော် အမှုတော်ကို ထမ်းခဲ့သည်။ ထိုနောက် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် သရက်ခုံရွာတွင် (၁၉၅၀) မှ (၁၉၅၃) အထိ (၄)နှစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ထိုနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် စာချပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် (၅)နှစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ကလေးမြို့နယ် တာဟန်းတွင် (၂)နှစ်၊ ရွှေဘိုခရိုင် ရွာတော်တွင် (၂)နှစ် အမှုထမ်းပြီး (၁၉၆၁)ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ တော်အေ -ဦးဘခင်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး (၂၂)ပါး၊ မန္တလေး သာသနာအရပ်ရပ်မှ ဘာသာဝင် (၂၀၀၀)ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။
မစ္ဆားတရားတော်တွင် ချောင်းရိုး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်အန်ထော်နီက သြ၀ါဒ စကားမြွက်ကြားရာတွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်ပတ်လုံး ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးကျူးလျက် ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဘ၀ ဖြစ်စဉ် ရာဇ၀င်ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပြီးနောက် ဘာသာထဲဝင်လာသော မိဖတို့မှ မွေးဖွား၍ သေးငယ်လှသော ရွာငယ် ဇနပုဒ်ကလေးမှ အဘိုးတန်လှသော ရဟန်းတပါးသာမက ဖါသာရ်ဂျွန်၏ နှမတယောက်ဟာလဲ စိန်ဂျိုးဇက်ဂိုဏ်းမှ သီလရှင်တပါး ဖြစ်မြောက်၍ ယခု ချင်းတောင်သာသနာတွင် မာသာရ်ကြီးအဖြစ်နှင့် ဘုရားအမှုတော်ကို ထမ်းရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စသည်ဖြင့် အကျယ်တ၀င့် မိန့်ကြားသွားပါသည်။ ဖါသာရ်ဂျွန်သည် ဂျူဗလီခံပြီး ထိုနှစ်မှာပင် ချောင်းဦးသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်(၁၉၆၇) မှ (၁၉၇၁) အထိ အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၆၉) တွင် မုံရွာ ဘုရားကျောင်းကျပ်ငွေ (၁၆၁၄၇) အကုန်အကျခံ၍ တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၁) မှ (၁၉၇၇) ထိ ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ (၁၉၇၇) ခုနှစ်မှ စ၍ အနားယူရင်း ချမ်းသာကုန်းရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။(၁၉၉၀) ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာကုန်း၌ ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် စခရီးဗင်း-ဦးဘတုတ် (၁၉၁၁-၁၉၇၉)
ဖါသာရ် စခရီးဗင်း ဦးဘတုတ်သည် (၁၉၁၁)ခု အောက်တိုဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျွဲဘွဲ(တောင်ငူ)၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဂျော့မွန်တေ့နှင့် ရိုစ်ဂျိုစဖင်း စခရီးဗင်းတို့ဖြစ်သည်။ (၁၉၃၂) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ရဟန်းဖြစ် သင်ကျောင်းဝင်သည်။ ထိုမှတဆင့် ပီနန်ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၄၂) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ဖါသာရ် စခရီးဗင်းသည် ချောက်မြို့တွင်၎င်း၊ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၀) မှ (၁၉၆၇)အထိ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ (၁၉၆၇) မေလမှ (၁၉၇၄) မတ်လအထိ ရွှေဘို ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကိုလည်း ကြည့်ရှုရသည်။ ရွာတော် ခေါင်းလောင်းစင်ရှိ ငှက်ပျောဖူးကို လေကြမ်းတိုက်လျှင် ပြုတ်ကျနိုင်သဖြင့် ရွှေဘိုမှ လက်သမားများကို ခေါ်ယူကာ ဖျက်၍ သွတ်အုပ်ဆောင်းငယ် မိုးထားခဲ့သည်။ ထိုနောက်(၁၉၇၄) ခု မှ (၁၉၇၉) ခုနှစ်အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက် ဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းရသည်။ (၁၉၇၉) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁) ရက်နေ့တွင် မေမြို့၌ ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ်ယူးစတေ့ - ဦးချစ်ဦး (၁၉၁၈-၁၉၈၄)
(Fr.Eustace U Chit U)
ဖါသာရ် ယူးစတေ့ ဦးချစ်ဦးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့နယ် မုံလှရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးအေး-ဒေါ်ဖွားယုံတို့ ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း(၄) ယောက်အနက် ဒုတိယသား ရတနာဖြစ်သည်။ (၁၉၁၈) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ (၁၉၃၁) ခု မတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ (၁၉၃၅) မှ (၁၉၄၁) ခုနှစ် အထိ ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၄၁)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ (၁၉၄၃) ခု မတ်လ (၂၁)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မနော်ယမံ စိန်ဂျွန်းကျောင်း၌ ဆရာတော် ဖါလီးယေးလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုးကုတ်မြို့နယ် ပန်ပေါက်ကျေးရွာတွင် ကချင်အမျိုးသားများအား တရားရေအေး တိုက်ကျွေးရင်း ကချင် ဘာသာစကား ကချင်လူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ ထုံးစံ ရိုးရာ မနောအကကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ပန်ပေါက်မှ တဆင့် ချင်းပြည်နယ် ထိုမှတဖန် မြစ်ငယ်၊ မြောက်ကိုင်း၊ ရွာတော်၊ မိတ္တီလာ၊ သာစည်၊ ရမည်းသင်း၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ၊ ချမ်းသာရွာ စသောဒေသများမှ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ (၁၉၅၄) ခု (၁၉၅၆) အထိ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ စစ်ပြီးစက ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းသားများအတွက် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ကျောင်းဆောင်သည် ချပုန်းများ တက်နေသဖြင့် ဖျက်ပြီး လက်ရှိ ကလေးများ ဘုရားစကားသင်ရန်နှင့် စာသင်ရန်အတွက် နောက်ဘက်တိုး၍ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ဘုရားကျောင်းပွဲတော်နှင့် ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ပွဲတော်နေ့များတွင် ရွာသူရွာသားများ ကပြအသုံးတော်ခံရန် ဇာတ်ခုံကြီးကို ကျောင်းရှေ့ ကွင်းပြင်တွင် ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း မီးပူဇော်ရန်အတွက် အင်ဂျင်မီးစက်ကို ငွေကျပ်သုံးသောင်းဖြင့် ၀ယ်ယူပြီး ခေါင်းလောင်းစင်ထိပ်ထိ မီးသီး မီးချောင်းများတပ်ဆင်ကာ ညစင် ညတိုင်း မီးထွန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ညစဉ် မီးထွန်းသဖြင့် ခိုးသား ဓပြရန်မှလည်း ကင်းဝေးသည်။ (၁၉၆၇) ခုနှစ်မှ (၁၉၇၀) ခုအထိ ချမ်းသာရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ (၁၉၆၈) ခုတွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲကို ချမ်းသာရွာ၌ ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ယူးစတေ့သည် (၁၉၇၁) မှ (၁၉၈၄) အထိ ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့်နဘက် မုံရွာဘာသာဝင်များကိုပါ ကြည့်ရှုရသည်။ မုံရွာ ဘုရားကျောင်း ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနေကျောင်း အဖီ ချခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် (၁၉၈၂) ခုနှစ်မှစ၍ ကျမ်းမာရေး တစတစ ချွတ်ယွင်းလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မိမိ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကြေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်က မန္တလေးသို့ လာရောက် ဆေးကုရန် အကြိမ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်သော်လည်း ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ယူးစတေစ်သည် (၁၉၈၄) ခု ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့ နံနက် (၆)နာရီတွင် ရောဂါ ပြင်းထန်စွာ ခံစားရသည်။ ထိုနေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ရောက်ရှိလာပြီး အသဲအသန်ဖြစ်နေသော ဘုန်းတော်ကြီးကို နောက်ဆုံး စက္ကမင်တူးများ ပေးသည်။ နံနက် (၈)နာရီ (၄၅)မိီနစ်တွင် ပျံတော်မူသည်။ ထိုနေ့ ည(၇)နာရီတွင် မန္တလေးသာသနာ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၊ ဖါသာရ်ဖီးလစ်နှင့် ကိုရင် (၃)ပါးရောက်ရှိလာကြသည်။ နောက်ရက်တွင် လားရှိုးမှ မွန်ဆီညော်ဂျော့စလင်း၊ ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး (၁၂)ပါး၊ သီလရှင် (၁၆)ပါးနှင့် မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ နဘက်၊ ရွှေဘို၊ မုံလှ၊ ချောင်းရိုးမှ ဘာသာဝင်များလည်း အချိန်မီ ရောက်လာကြသည်။
(၁၃.ရ.၈၄)နေ့ ညနေသုံးနာရီတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အာလ်ဖုန်းစ် ဦးသန်းအောင် ဦးဆောင်ကာ မွန်ဆီညော် ဂျော့စလင်းနှင့် ရဟန်းဘုန်းကြီး (၁၂)ပါးခြံရံ၍ အတူတကွ မစ္ဆားပူဇော်ကြသည်။ မုံရွာသာသနာ့ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ မုံရွာဘာသာဝင်များက လွမ်းသူ့ပန်းခွေများနှင့် ရွှေထီး (၄)လက်ဖြင့် မွမ်းမံထားသော ပန်းရထားပေါ်သို့ ရုပ်ကလပ်တော်ကို တင်၍ ပန်းရထားကို သီလရှင်များက ပန်းကြိုးဖြင့် ဆွဲ၍ သင်္ချိုင်းသို့ ပို့ဆောင်သည်။ ချောင်းဦးမြို့နယ် ပါတီကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အားလုံး စုစုပေါင်း လူ(၂၀၀၀)ခန့် လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ကြသည်။
ဖါသာရ် ဖီးလစ်ဦးလင်း (၁၉၁၃-၁၉၉၂)
(Fr.Felix U Lin)
ဖါသာရ် ဖီးလစ် ဦးလင်းသည် (၁၉၁၃) ခု နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဘိုးဇွင် ဒေါ်အန်နားတို့ဖြစ်သည်။ ဖါသာရ် ဖီးလစ် မောင်နှမ အရင်းအချာများမှာ ဆရာတော် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်း၊ ဒေါ်မေ၊ ဒေါ်ငွေ၊ ဖါသာရ် အန်ထော်နီ ဦးကျော်မင်းနှင့် ဒေါ်ကြွေတို့ဖြစ်သည်။
သတ္တမတန်းအောင်သည် အထိ ချမ်းသာရွာ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၂၉)တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။(၁၉၃၃) ခုတွင် ပီနန်ကောလိပ်သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၄၉) ခု နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည်။ (၁၉၄၆)ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ဖါသာရ် ဂျက္ကဆင် ဦးကျော်ဇံ၊ ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်၊ ဖါသာရ် ဆီရီလူး ဦးချစ်မောင်တို့နှင့်အတူ ရဟန်းသိက္ခာ တင်ပြီး ရွာတော်တွင် တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၄၈) ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ (၁၉၄၉)ခုဇန္န၀ါရီလ အထိ ရွာတော်ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။ ရွာတော်ရွာတွင် လူဦးရေများပြားလာပြီး အိမ်ပူး အိမ်ကပ်များလည်း တိုးပွားလာသဖြင့် ရွာနှင့် ဘုရားကျောင်းကြားရှိ လယ်မြေများကို ချီပါရွာ ဦးသက်ပြန် ထံမှ ၀ယ်ယူပြီး ရွာသားများကို နေရာ ချထားပေးသည်။ ရွာနှင့် ဘုရားကျောင်း တဆက်တည်း ဖြစ်သွားသည်။ ဂျပန်ခေတ်က (၃)နှစ် (၃)မိုး စွန့်ပစ်ထားခဲ့သော နွားရိုးများကို ရောင်းချပြီး ရရှိသောငွေများဖြင့် ဘုရားကျောင်းအတွင်း ထိုင်ခုံများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
(၁၉၄၉) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ စာချ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။ (၁၉၄၇) ခုနှစ်မှစ၍ ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းသားများအား စာပေ ပို့ချသင်ကြားခဲ့ရသည်။ (၁၉၅၈) ခုတွင် ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သော အီတလီ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၆) ခုနှစ်မှ စ၍ (၁၉၇၁)ခုနှစ် အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းအုပ် အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် (၂၂)နှစ်တိုင် စာပေ သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ မိမိ တပြည့်များထဲမှ ဘုန်းကြီး (၃၃)ပါး ဆရာတော် (၃)ပါးဖြစ်သည်။ (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ကျောင်းအုပ်အဖြစ်မှ အနားယူ၍ မုံလှရွာတွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းရသည်။ မုံလှရွာ၌ မိမိ ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ (၁၉၈၃) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ မန္တလေးမှာပင် အနားယူတော့သည်။ (၁၉၈၅) ခု ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ယောဟန်ပေါလူး၏ ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်ရံတော်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။ (၁၉၈၆) ခု မေလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မန္တလေး ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း၌ ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်ရံတော် ဘွဲ့ရရှိသော အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။ (၁၉၉၂) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့တွင် မန္တလေး သံဝင်းရပ် စိန်မိုင်ကယ်ကျောင်း၌ ပျံတော်မူသည်။ ဖါသာရ် ဖီးလစ်ဦးလင်း၏ ရုပ်ကလပ်ကို သံဝင်းကျောင်းမှ ပြင်ဦးလွင်သို့ သယ်ဆောင်ပြီး၊ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်း အတွင်း ဂူသွင်း သဂြိုလ်သည်။
ဖါသာရ် ဆီရီလူးစ် ဦးချစ်မောင် (၁၉၁၉-၁၉၄၇)
(Fr. Cyril U Chit Maung)
ဖါသာရ် ဆီရီလူးစ် ဦးချစ်မောင်သည် (၁၉၁၉) ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးပေတလူးနှင့် ဒေါ်လှမယ်တို့ ဖြစ်သည်။ (၁၉၃၃)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းဝင်သည်။ (၁၉၄၆)ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ ဆရာတော် ဖါးလီးယေးလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၄၇) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၉)ရက်နေ့တွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် သရက်ခုံရွာတွင် ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် ဂျက္ကဆန် ဦးကျော်ဇံ
(Fr. Jackson U Kyaw Zan)
ဖါသာရ် ဂျက္ကဆန် ဦးကျော်ဇံသည် (၁၉၁၆)ခု ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ပျဉ်းမနား၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ မစ္စတာဖရန့်ဂျက္ကဆန်နှင့် ဒေါ်နွယ်တို့ ဖြစ်သည်။ (၁၉၃၄) ခု မေလ (၈)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ ထိုမှတဆင့် ပီနန်ရဟန်း ဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၄၆) ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံတွင်၎င်း၊ တာဟန်းတွင်၎င်း၊ သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၃) ခု ဇန္န၀ါရီလမှ(၁၉၅၄) ခု ဇန္န၀ါရီလအထိ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထိုနောက် မန္တလေး ကာသီဒရယ်ကျောင်းတွင်၎င်း၊ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းတွင်၎င်း၊ သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရစဉ် လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ လူအများကို ဆေးကုသပေးသည်။ ရွာသူရွာသားများ သောက်သုံးရန်အတွက် ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ပြည်တော်သာ ရေကန်ကို တူးဖေါ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ် စတီယန် (၁၉၁၇-၁၉၇၆)
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်သည် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ကေရာလာ (Kerala) တွင် (၁၉၁၇)ခု သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၃၄) ခုတွင် (၁၀)တန်းအောင်ပြီးနောက် နိုင်ငံခြား သာသနာပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လို၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ (၁၉၃၅)ခုတွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၃၈) ခုတွင် ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၄၆)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် ချမ်းသာရွာတွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်အား စိန်ဇေးဗီးယား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးသော်လည်း ချက်ချင်း လက်မခံသေးဘဲ မိဘ ဆွေမျိုးများနှင့် တွေ့ရန် (၃)လ ခွင့်ရသဖြင့် အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ဆွေမျိုးများထံ အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၄၇)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလရောက်မှ စိန်ဇေးဗီးယား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးတာဝန်ကို စတင် ဆောင်ရွက်သည်။ များမကြာမီ ဆရာမ ဒေါ်ညွန့်ခင်၊ မစ္စမေရီဒါတ်စ်နှင့် ဦးဒိုရေရရ်ှတို့၏ အကူအညီဖြင့် မူလတန်း စာသင်ကျောင်း ပြန်ဖွင့်ခဲ့သည်။
(၁၉၄၇) ခုနှစ်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာကြမည့်ဗြိတိသျှ ဘုရင်လေတပ်မတော်သားများထံ မှ အလှူငွေများ လက်ခံရရှိသည့်အတွက် ၄င်းငွေများကို မတည်၍ စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း အသစ်ကို လက်ရှိနေရာ စိတ္တရမဟီရပ်တွင် စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှဘုရင် လေတပ်မတော်သားများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ကျောက်ပြားတွင် ကမ္ပည်းထိုးကာ ဘုရားကျောင်းအတွင်း နံရံတွင် ကပ်ထားပါသည်။ ဘုရားကျောင်း အသစ်ကို (၁၉၄၉)ခု မေလ အစောပိုင်းတွင် ပန္နက်ရိုက် အုတ်မြစ်ချပြီး (၁၉၅၀) အောက်တိုဘာလတွင် ပြီးစီးပါသည်။ (၁၉၅၀)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက် စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယားပွဲနေ့တွင် ဘုရားကျောင်းသစ် ကောင်းကြီးပေးခြင်း၊နှင့် ခရစ္စမားပေးခြင်းများ အပြိုင်တည်း ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤဘုရားကျောင်းသစ်ကို မန္တလေးမြို့ ၈၂-လမ်းရှိ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း တည်ဆောက်ပေးသူ အင်ဂျင်နီယာ မစ္စတာအာရ်ဒီရတ်နမ်းက တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်သည် (၁၉၅၁) ခုနှစ်တွင် စိန်ဇေးဗီးယား မူလတန်းကျောင်းကို အလယ်တန်းကျောင်း အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မာရီယား တမန်တော်အသင်းကို (၂၃.၉.၁၉၅၉) နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ (၁၉၅၄) ခုတွင် အဆောက်အဦး (၂) ခု ဆောက်လုပ်၍ စ်ိန်ဇေးဗီးယား အလယ်တန်းကျောင်းကို အထက်တန်းကျောင်း အဖြစ် တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၅) ခုတွင် သီလရှင်များနှင့် မိဖမဲ့ ကလေးများအတွက် (၂)ထပ် အဆောက်အဦးတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၆) ခုနှစ်တွင် ကက်သလစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကလပ်တခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် ဖါတီမာမယ်တော် ကျောင်းဆောင်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၀) ပြည့်နှစ်တွင် လက်ရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို လက် (၂) ဘက် တိုးချဲ့၍ ပြန်လည် မွမ်းမံ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၅) ခုတွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြည်သူပိုင်သိမ်းသဖြင့် ဖါသာရ်ဆေဗတ်စတီးယန်၏ စိန်ဇေးဗီးယား အထက်တန်းကျောင်း ပြည်သုပိုင် အသိမ်းခံရသည်။ ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးနောက် ဘုရားကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းကို တံတိုင်း ကာရံ၍ ပိုင်းခြားလိုက်ရသည်။ မနော်ယမံ စိန်ဂျွန်းအနာကြီး ကုဆေးရုံကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်သောအခါ စိန်ဂျွန်းဘုရားကျောင်းမှ ခေါင်းလောင်းနှင့် သံစုံကြီးကို စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း အတွက် ယူ၍ သုံးခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်သည် (၁၉၅၁)ခုနှစ်မှ စ၍ မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်အသီးသီးတွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော ကက်သလစ် ကျောင်းသူကျောင်းသာများအသင်းကို ဖွဲ့စည်း၍ ဘာသာရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးများတွင် အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုရရှိကြပြီး၊ စည်းလုံးညီညွှတ်စေရန် တစ်လတကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စုပေါင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့မှအပ နေ့စဉ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့သွား၍ လူနာများကို ကြည့်ရှုကာ လိုအပ်သည့် အကူအညီများပေးသည်။ အကျဉ်းထောင်ကိုလည်း တလတကြိမ် သွားရောက်၍ ဘာသာဝင် အကျဉ်းသားတို့အတွက် မစ္ဆားပူဇော်ခြင်း၊ အာပတ်ဖြေ နားထောင်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်မြတ်ပေးခြင်းများ အပြင် ထိုသူတို့၏ အခက်အခဲများကိုလည်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ နန်းတွင်းနှင့် အပြင် စစ်တပ်များသို့လည်း သွားရောက်၍ ဘာသာဝင် စစ်သားများအား ဘာသာဝတ္တရား ကြေပွန်အောင် ဟောပြော နှိုးဆော်ပေးသည်။ ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီးယန်၏ ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ဂျူဗလီပွဲကို (၁၉၇၁)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်သည် (၁၉၇၁) ခုနှစ်မှစ၍ ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းလာသဖြင့် မန္တလေး ဆေးရုံကြီးရှိ သမားတော်ကြီးများအား ပြသရာ အသဲနှင့်ကျောက်ကပ်ပါ ရောဂါစွဲကပ်သည့် အပြင် ဆီးချိုရောဂါလည်း စွဲကပ်ရာ သွေး၌ပင် အချိုဓါတ်ဝင်ရောက်နေသဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက် ကုသရန် ညွှန်ကြားသဖြင့် ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်ကုသသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တလခန့် ကုသရာ ရောဂါမှာ ပျောက်ကင်းနိုင်ရန် အခြေအနေမရှိ နေသာထိုင်သာ သက်သာရုံသာ ကုသပေးနိုင်သဖြင့် မည်သည့်အစာကိုသာ စားရမည်။ မည်သည့်အစာကို ရှောင်ရမည်၊ သွားလာရာ၌လည်း စက်ဘီး မစီးရ၊ လမ်းရှောက် မသွားနိုင်သော ခရီးကို ကားဖြင့် သွားရမည်ဟု ညွှန်ကြားလိုက်သည်။ သို့သော် အခါခပ်သိမ်းကား မရနိုင်သဖြင့် ဆိုက်ကားဖြင့် သွားရသည်က များသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူထဲမှ နာရေးကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ပါက သင်္ဂြိုလ်စရိတ် အထောက်အပံ့ရရန် ရည်ရွယ်၍ (၁၉၇၆) ခု မတ်လ (ရ)ရက်နေ့တွင် စိန်ဇေးဗီးယား နာရေးအသင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်သည် ရောဂါဖိစီးမှု ဒဏ်ခံရသော်လည်း ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၆) ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂၆) ရက်နေ့တွင် ရောဂါ ပြင်းထန်လာပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် အိပ်ရာထဲလဲတော့သည်။ ဝေဒနာ ပြင်းထန်သဖြင့် မအိပ်နိုင် မနေနိုင် ခံစားရသည်။ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်နေ့မှ စ၍ ရောဂါအခြေအနေ တနေ့ထက် တနေ့ ပိုမုိ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဆရာဝန်သမားတော်ကြီးများ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကုသသော်လည်း (၁၉၇၆) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ည (၁၂) နာရီအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်၏ ရုပ်ကလပ်ကို စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း အတွင်း ပြင်ဆင်ထား၍ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟ ရဟန်း ကိုရင် သီလရှင်များ ဘာသာဝင်များ လာရောက် ဂါရ၀ ပြုကြသည်။ ကျောင်းသားဟောင်းများက ဈာပနကော်မတီဖွဲ့၍ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်၏ ရုပ်ကလပ်ကို သင်္ချိဲုင်းသို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုလ်ရန်အတွက် သာသနာမှ ကားကြီး အစီး(၂၀)နှင့် အုတ်ဂူ၊ တမီးလ်ဘာသာဝင်များက အလောင်းထည့်ရန်ခေါင်း၊ အမှတ်(၁၂) အထက ကျောင်းအုပ် ဒေါ်တင်တင်ခင်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများက ယပ်တောင် (၁၅၀၀)နှင့် လွမ်းသူ့ပန်းခွေ၊ မစ္စတာဆိုက်ပယ်က ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဓါတ်ပုံနှင့် အထိမ်းအမှတ်ကဒ်ပြား (၁၀၀၀)စသည်ဖြင့် အသီးသီး တာဝန်ယူကြ၍ ကျန်လိုအပ်ချက်များကို ကျောင်းသာဟောင်းများက တာဝန်ယူသည်။
(၆.၁၁.ရ၆) နေ့ ညနေ (၂)နာရီအချိန်တွင် စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း၌ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးဘခင်၊ ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင်၊ ဆရာတော် ဂျော့စလင်တို့ဦးဆောင်၍ ဘုန်းတော်ကြီး (၁၅)ပါး ခြံရံကာ ဈာပနမစ္ဆားပုဇော်ပွဲ အခန်းအနား ကျင်းပပါသည်။ မစ္ဆားပူဇော်ပွဲအပြီးတွင် အထူး ပြင်ဆင်ထားသော ရွှေထီး လေးလက်မိုးထားသည့် ဈာပနယာဉ်ပေါ်တွင် ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန်၏ ရုပ်ကလပ်ကို တင်ဆောင်ပြီး ကျောင်းသား(၁၀၀) ကျောင်းသူ (၁၀၀)တို့က ရှေ့ကတဘက်စီ တန်း၍ အေလမ်း သင်္ချိုင်းသို့ ဆွဲယူ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ဈာပနအခန်းအနားတွင် သာသနာမှ ကားကြီး အစီး(၂၀) ကျောင်းသာဟောင်းများမှ ကားကြီး (၆)စီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် အစီး(၃၀) လူပေါင်း (၃၀၀၀)ခန့်လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ကြသည်။
ဖါသာရ် ဆေဗတ်စတီယန် ဆန္ဒကို ရည်စူး၍ နေပူ မိုးရွာ ခေတ္တနားခိုရန် စိန်ဇေးဗီးယားကျောင်းအတွင်း ဆေဗတ်စတီယန်ဟော အမည်ဖြင့် အဆောင်တခုကို ယ္ခုရာပြည့်ခန်းမနေရာတွင် ကျောင်းသားဟောင်းများက ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရာပြည့်ခန်းမ ဆောက်လုပ်သောအခါ ယင်းအဆောင်ကို ဘုရားကျောင်း၏ အရှေ့မြောက်သို့ရွှေ့သည်။ နောက် ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်သောအခါ ယင်းအဆောင်ကို ဘုရားကျောင်း မြောက်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းထားရာ ယနေ့တိုင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:41 PM
ဘာကြောင့် မေလကို စိတ်ပုတီးလလို့ သာသနာတော်က သတ်မှတ်...